ပျံသန်းနေသောခွပ်ဒေါင်းတကောင်: 2/1/10 - 3/1/10
"ဒါပေမဲ့လည်း အခုလိုမျိုး ခပ်ပျော့ပျော့ အားနည်းတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေ ထုတ်ပြန်ခြင်းအားဖြင့် လက်ရှိအချိန်မှာတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင်က ပြဿနာရဲ့ တစိတ်တပိုင်း ဖြစ်နေပါတယ်။ သူတို့က မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ဆက်သာလုပ်၊ လူတွေကို ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေကို တိုက်ခိုက်၊ အာဏာရှင်စနစ် သက်ဆိုးရှည်စေမယ့် အခြေခံဥပဒေကိုကိုင်ပြီး အတုအယောင် ရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ် ဆိုပြီး ပြောသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဘန်ကီမွန်းကတော့ သူ စိတ်ပျက်တယ်လို့ ပြောတာပဲ။ ဒါပေမယ့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ ကြားမှာကတော့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို ဆက်သာလုပ်၊ ငါတို့ ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ ဆိုတာပါပဲ။"
တိုင်းပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မပါနိုင်အောင် ဘေးဖယ်ထုတ်ထားပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂,၁၀၀ ကျော်ကို ဆက်ပြီး ဖမ်းထားတာနဲ့အမျှ စစ်အစိုးရကကျင်းပတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာ နိုင်ငံတကာရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုကို မရသလို တရားဝင်မှုလည်း ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဂေါ်ဒွန်ဘရောင်းက ပြောပါတယ်။
"တကယ်ပဲ ဖိအားကျလာတော့မယ်ဆိုတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ သူတို့လုပ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့အချိန်မှာတော့ လုပ်ကို မလုပ်ပါဘူး။ ASEAN အဖွဲ့က တိုးတိုးတိတ်တိတ် ၀န်ခံထားတာရှိပါတယ်၊ သူတို့လုပ်ခဲ့တာ မြန်မာ့အရေးမှာ လုံးဝ မအောင်မြင်ဘူး၊ သူတို့ရဲ့ ပျော့ပြောင်းညင်သာတဲ့ ချဉ်းကပ်မှုက အလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ ၀န်ခံထားပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ်အမျိုးမျိုး မြန်မာနိုင်ငံကို ၄၁ ကြိမ်သွားခဲ့ဖူးပါပြီ၊ အပြောင်းအလဲလေးတခုတောင် မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ တခုခုလုပ်တဲ့အချိန်ကတော့ နိုင်ငံတကာ ဖိအားအောက်မှာ ရောက်နေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။"
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေတွေကတော့ ဥပဒေလမ်းကြောင်း ဆုံးတဲ့တိုင်အောင် လုပ်စရာရှိတာတွေကို ဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး နောက်တဆင့် အထူး အယူခံတင်မယ်လို့ ဗွီအိုအေကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ ( ဗွီအိုအေ )
Posted by flyingpeacock at 9:59 AM0comments Links to this post
ဥရောပ သံတမန်များနှင့် NLD ခေါင်းဆောင်များတွေ့
ဥရောပ သမဂ္ဂ (EU) အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများမှ သံတမန်များသည် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ခေါင်းဆောင်များနှင့် ယနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် တွေ့ဆုံပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်သည့် သဘောထားကို မေးမြန်းကြကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန် အခြေစိုက် ဂျာမနီ၊ ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ်၊ နော်ဝေ၊ အီတလီ သံတမန် များသည် အမေရိကန် သံတမန်များနှင့် အတူ ရန်ကုန်ရှိ NLD ရုံးသို့ သွားရောက်ပြီး ဦးတင်ဦး၊ ဦးဝင်းတင်၊ ဦးခင်မောင်ဆွေ၊ ဦးညွန့်ဝေတို့နှင့် ၁ နာရီ ကျော် ဆွေးနွေးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
“ဥရောပ ပါလီမန်က ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာတဲ့ အခါမှာ သူတို့ အနေနဲ့ ဘယ်လို ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်မလဲပေါ့၊ ကျနော်တို့ကို ထောက်ခံ အားပေး နေပေမယ့် ပါတီ သဘောထားက ဘယ်လို ပြက်ပြက် ထင်ထင် ရှိတယ် ဆိုတာ သိရင် သူတို့ဘက်က ဘာတွေ ကူညီနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့ အနေ အထားနဲ့ လာတာပါပဲ” ဟု NLD ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ဦးခင်မောင်ဆွေက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ယခုနှစ်အတွင်း စစ်အစိုးရက ပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်ရေး၊ မ၀င်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ “ဆုံးဖြတ်ရန် အချိန် မကျသေး” ဟူသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏မူကို NLD က ကိုင်စွဲထားသည်ဟု ပြန်လည် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သူက ရှင်းပြသည်။
ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ (CEC) အဖွဲ့ဝင်များ စုံညီ တွေ့ဆုံပြီးမှ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆုံးဖြတ်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် CEC တွေ့ဆုံရန် အရေးကြီးကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ တွေ့ဆုံရန် ပိုမို အရေးကြီးကြောင်း ဦးခင်မောင်ဆွေက ပြောသည်။
NLD သည် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ထုတ်ပြန်သော ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်းပါ မူများအတိုင်း ရပ်တည်လျက် ရှိသည်။ ထိုကြေညာစာတမ်းတွင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား လွှတ်ပေးရန်၊ ၂ဝဝ၈ အခြေခံ ဥပဒေကို သုံးသပ် ပြင်ဆင်ရန်၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အလွှာ အသီးသီး ပါဝင်ပြီး နိုင်ငံတကာက စောင့်ကြည့်ခွင့်ပြုရန် ဟူသော အချက်များအား စစ်အစိုးရက လိုက်လျောလျှင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို လက်ခံမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
EU သံတမန်များသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် NLD ခေါင်းဆောင်များကို သီးခြားစီ တွေ့ဆုံ၍ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတို့ နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ( ဧရာဝတီ )
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် လျှောက်လဲချက် ပယ်ချခံရ
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ချမှတ်ထားတဲ့အမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အကျိုးဆောင် ရှေ့နေတွေဘက်က တင်သွင်းခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်မှု လျှောက်ထားချက်ကို ဒီကနေ့မှာ ဗဟိုတရားရုံးက ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် အခုလို ပယ်ချခဲ့တာလဲဆိုတာကို ဗဟိုတရားရုံးက ပြောဆိုခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်က ပြစ်မှုတစုံတရာ ကျူးလွန်မှုမရှိကြောင်းနဲ့ ဒီအမှုအတွက် အထူး အယူခံတင်သွင်းဖို့ ရှိတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အကျိုးဆောင် ရှေ့နေကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပြပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို ဒေါ်ခင်မျိုးသက်က တင်ပြထားပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်း တရားရုံးချုပ်က ပယ်ချခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ချထားမှု အယူခံအတွက် ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ တင်သွင်းခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်မှု တင်သွင်းချက်ကို ဒီကနေ့ ဗဟိုတရားရုံးချုပ်က အကြောင်းပြချက် တစုံတရာမပေးဘဲ ပယ်ချခဲ့တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရှေ့နေကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
"မနက်က ၁၀ နာရီကလေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တင်တဲ့အမှု၊ ပြင်ဆင်မှုပေါ့၊ နောက်ပြီးတော့ ခင်ခင်ဝင်း တို့တင်တဲ့အမှု၊ နှစ်မှုစလုံးကို ပယ်လိုက်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ အထူး အယူခံတင်ဖို့ လုပ်ပါမယ်။"
အထူးအယူခံ တင်ရင်ရော ထူးခြားမှုရှိမယ်လို့ ထင်ပါသလား အဲန်ကယ်လ်၊ -
"ဟုတ်ကဲ့။ ဥပဒေလမ်းကြောင်းဆုံးအောင် ကျနော်တို့ လုပ်ပါမယ်။ ကိုယ်လုပ်ရမယ့် ၀တ္တရားက ဥပဒေလမ်းကြောင်း ဆုံးအောင် လုပ်ဖို့ပါ။"
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှုကို ဒီလိုမျိုး ပယ်ချမယ်လို့ အဲန်ကယ်လ်တို့အနေနဲ့ မျှော်မှန်းထားပါသလားအဲန်ကယ်လ်၊ -
"ကျနော် မမျှော်မှန်းဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒေါ်စုက ဘာအပြစ်မှ မကျူးလွန်လို့ လွတ်မြောက်ရမယ်လို့ ကျနော် ဒီအတိုင်း ယုံကြည်တယ်။"
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက ပြောထားတာရှိပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တကယ်လို့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နေထိုင်မယ်ဆိုရင် သူ ပြန်ပြီးတော့ လွှတ်ပေးမယ်လို့ ပြောထားတဲ့စကားရှိတော့လေ။ အဲန်ကယ်လ်တို့အနေနဲ့ သွားသွားပြီးတော့ တွေ့နေရတဲ့လူတွေအနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့…….
"ကျနော်တို့ကို သူက asajoke (ဟာသတခုအနေနဲ့) ပြောတယ်။ သူနေထိုင်တာ စည်းကမ်းနဲ့နေတာ၊ ဆိုတော့ ကျနော်ကလည်း ဟာ. နေတာပေါ့ စည်းကမ်းနဲ့နေတာ၊ စည်းကမ်းအပြင်ကို တခုမှမလုပ်ဘူးလို့ ဒါက ကျနော် ပြောခဲ့တာ။ ဒါ ဟာသတခုသဘောလည်း ပါပါတယ်။"
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဒီပဲယင်း အရေးအခင်းနောက်ပိုင်း နိုင်ငံတော် နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးသူများရန်က ကာကွယ်ရေး ဥပဒေနဲ့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရတာကနေ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် လွတ်ရက်စေ့ခါနီးမှာ နေအိမ်ဝန်းအတွင်း အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဂျွန် ၀ီလီလျံယက်တော တိတ်တဆိတ်ခိုးဝင်မှုနဲ့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ၁၈ လ ထပ်မံချထားတာကို ခံခဲ့ရတာပါ။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြုလိုက်တဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ ၁၉၇၄ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေ ရပ်ဆိုင်းသွားတာမို့ သုံးစွဲခွင့်မရှိတဲ့အပေါ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်က ရှေ့နေတွေက လျှောက်လဲခဲ့ကြပါတယ်။ အစိုးရရှေ့နေတွေဘက်ကတော့ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို တရားဝင် ဖြတ်သိမ်းကြောင်း မကြေညာသေးတဲ့အတွက် သုံးစွဲခွင့်ရှိတယ်လို့ လျှောက်လဲခဲ့ကြတာပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ကတော့ အယူခံအမှုတွေကို ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း နဲ့ မ၀င်းမမ တို့ရဲ့အမှုတွဲတွေကိုလည်း ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးက ပယ်ချခဲ့သလို ဒီကနေ့ ဗဟိုတရားရုံးကလည်း ပယ်ချခဲ့တာမို့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေကြီး လေးဦးဘက်က အထူး အယူခံတင်သွင်းဖို့အတွက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ( ဗွီအိုအေ )
Posted by flyingpeacock at 9:34 AM0comments Links to this post
အမေရိကန်သံရုံး ယာယီတာဝန်ခံနှင့် NLDဗဟိုကော်မတီ တွေ့
ရန်ကုန်မြို့ရှိ အမေရိကန်သံရုံး ယာယီ တာဝန်ခံက အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဗဟိုကော်မတီ အဖွဲ့ (CEC) ၀င်များနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အပေါ် NLD ၏ သဘောထား၊ နိုင်ငံရေး အမြင်များကို မေးမြန်းကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန်သံရုံး ယာယီတာဝန်ခံ မစ္စတာလယ်ရီ ဒင်းဂါးနှင့် အတွင်းရေးမှူး ဂျနီဖာ အေဟိုက်တို့သည် ရွှေဂုံတိုင်ရှိ NLDရုံးချုပ်၌ ယမန်နေ့ နေ့လယ် ၁ နာရီခန့်က CEC အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဦးတင်ဦး၊ ဦးဝင်းတင်၊ ဦးခင်မောင်ဆွေ၊ ဦးညွန့်ဝေ၊ ဦးသန်းထွန်းတို့ နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း NLDကပြောသည်။
NLD ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ဦးခင်မောင်ဆွေက “ဗဟို ဦးစီးကော်မတီဖွဲ့တဲ့ကိစ္စ၊ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကိစ္စတွေကို မေးတယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း ပြောထားတယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေး ဆုံးဖြတ်ဖို့ အချိန်မတန်သေးဘူး၊ အဲသလိုပဲ ရွှေဂုံတိုင် ကြေညာစာတမ်းမှာလည်း ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရေး မ၀င်ရေး မဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ မစ္စတာ ကာ့တ် ကမ်းဘဲလ် လာတုန်းက ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေလာပေးတယ်” ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိ NLDအနေဖြင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ထုတ်ဝေသော ရွှေဂုံတိုင်စာတမ်းပါ တောင်းဆိုချက်များ အတိုင်း ရပ်တည် သွားမည်ဟု ဆိုသည်။
ယင်းကြေညာ စာတမ်းတွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံး ခြွင်းချက်မရှိ ပြန်လွှတ်ပေးရေး၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေတွင် ဒီမိုကရေစီနှင့် မကိုက်ညီသောအချက် များကို ပြင်ဆင်ပေးရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု အောက်တွင် အားလုံး ပါဝင်သော လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရေး တို့ပါဝင်သည်။
အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူများက NLD၏ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရောက်ရေး၊ ၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးတို့နှင့် ပတ်သက်၍ တစုံတရာ ၀င်ရောက် ပြောကြားမည် မဟုတ်ဟု ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း NLD ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ ဦးဝင်းတင်က ပြောသည်။
“ရွေးကောက်ပွဲ မလုပ်ခင်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ကို သူတို့လိုလားတယ်၊ ဒါကိုလည်း သူတို့ တိုက်တွန်းတယ် ဆိုတာကိုတော့ ပြောတယ်”ဟု ဦးဝင်းတင်က ဆိုသည်။
ရန်ကုန်ရှိ အမေရိကန်သံရုံးက NLDနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သော်လည်း တစုံတရာ မှတ်ချက်ပေး ပြောဆိုခဲ့ခြင်း မရှိပေ။
အမေရိကန် အစိုးရအနေဖြင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ NLD အပါအ၀င် အတိုက်အခံ အင်အားစုများ၊ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် စစ်အစိုးရကို တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း ၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလက မြန်မာပြည်အပေါ်တွင် ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုနှင့် စေ့စပ်ဆွေးနွေးမှုများကို တပြိုင်တည်း ကျင့်သုံးသွားမည့် အမေရိကန်အစိုးရ၏ မှုဝါဒသစ်ကို ကြေညာခဲ့သည်။
ယင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးအမေရိကန် အဆင်ြ့မင့်အရာရှိများ၏ ၁၀ စုနှစ် နောက်ပိုင်း ပထမဆုံး ခရီးစဉ်အဖြစ် နိုဝင်ဘာ လတွင် အရှေ့အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ရေးရာ လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး မစ္စတာ ကာ့တ် ကမ်းဘဲလ်က မြန်မာပြည်သို့ အချက်အလက်ရှာဖွေရန် အတွက် သွားရောက်ခဲ့သည်။
သူ၏ ခရီးစဉ်အတွင်း စစ်အစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်၊ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များနှင့်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
၁၉၉၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကလည်း နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး မက်ဒလင်း အောဘရိုက်(Madeline Albright) သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်၍ စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်တချို့ နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တွေဆုံခဲ့သည်။ ( ဧရာဝတီ )
Posted by flyingpeacock at 9:32 AM0comments Links to this post
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျယ်ချုပ်မှု ပြင်ဆင်ချက် ဆုံးဖြတ်ချက် ချတော့မည်
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် အမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကျိုးဆောင် ရှေ့နေတွေဘက်က တင်သွင်းခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်မှု လျှောက်ထားချက်ကို သောကြာနေ့မှာ အမိန့်ချမှတ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၃ ခုနှစ် ဒီပဲယင်း အရေးအခင်း နောက်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံတော်ကို နှောင့်ယှက် ဖျက်ဆီးသူများ ရန်က ကာကွယ်ရေး အက်ဥပဒေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ချထားရာက တနှစ်ပြီးတနှစ် တိုးလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုနောက်ဆုံး အမေရိကန် နိုင်ငံသား ဂျွန် ၀ီလီယံ ယက်တော (John William Yettaw) နေအိမ်ကို ကျူးကျော် ၀င်ရောက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကို ၁၈ လ တိုးပြီး ချမှတ်ခံထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ ဒီအမှုအတွက် အမိန့်ချတော့မယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အကျိုးဆောင် ရှေ့နေကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းက အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“မနက်ဖြန် တရားရုံးချုပ်က အန်ကယ်တို့ တင်ထားတဲ့ ပြင်ဆင်မှု၊ အဲဒါကို အမိန့်ချမယ်။ ဒီဥစ္စာက အန်ကယ်တို့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် တမှု၊ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းအတွက် တမှု၊ ပြင်ဆင်မှုလို့ ခေါ်တယ်။ အဲဒီဟာကို တင်ထားတယ်။ တပြိုင်နက်တည်းမှာ အစိုးရကလည်း ရန်ကုန်တိုင်း တရားရုံးက ၇၄ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ မရှိတော့ဘူးလို့ သုံးသပ်တဲ့ အချက်ကို သူတို့က ပြင်ဆင်မှု တက်တယ်။ အဲတော့ ပြင်ဆင်မှု ၃ မှု။
“အဲဒါကို အစိုးရဘက်ရော၊ အန်ကယ်တို့ဘက်ရော၊ နှစ်ဘက် လျှောက်လဲချက် လွန်ခဲ့တဲ့လ ၁၈ ရက်နေ့က ပေးပြီးပြီ။ အဲတော့ ဒီအမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အမိန့်ချမယ်။ ဆိုလိုတာက အမိန့်မှာ အန်ကယ်တို့ နိုင်ခဲ့ရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လုံးဝ လွတ်မြောက်မယ်။ အန်ကယ်တို့ ရှုံးခဲ့ရင် အခု နေအိမ်အကျယ်ချုပ်က ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်ရှိမယ်။ အန်ကယ်တို့လည်း ဒီအမိန့် နားထောင်ဖို့ပဲ မနက် သွားရမှာပါ။ ချိန်းထားတာ မနက် ၁၀ နာရီပါ။”
ဒါ့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အမှု တတွဲတည်းဖြစ်တဲ့ အတူနေထိုင်သူ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းနဲ့ မ၀င်းမမတို့ဟာလည်း မူလအမှုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ် မူတည်နေပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြန်လွတ်ရင် သူတို့လည်း လွတ်မြောက်မယ်လို့ ရှေ့နေကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ( ဗွီအိုအေ )
Posted by flyingpeacock at 9:22 AM0comments Links to this post
NLD တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ အောင်မြင်စွာ ဖွဲ့စည်း
မြန်မာပြည်တ၀န်း တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် အသီးသီးက NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို ဦးဆောင်မှု ပေးနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိသူ ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင် ၁၀၀ ကျော်ကို စိစစ်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး NLD ဌာနချုပ်မှာ ဒီနေ့ ကျင်းပတဲ့ အစည်းအဝေးက အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ NLD CEC ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဦးအုန်းကြိုင်ကို ဒေါ်ခင်မျိုးသက်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ဒီကနေ့ NLD ရုံးချုပ်မှာ ဗဟိုဦးစီး အဖွဲ့ဝင်တွေ နာမည်စာရင်း တင်သွင်းထားတာ၊ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခြေအနေ ဘာထူးလဲဆရာ၊ ပြောပြပေးပါ။
“အောင်အောင်မြင်မြင် ပြီးသွားပါပြီ။ ပြည်နယ်၊ တိုင်းက သူတို့ မူအတိုင်း လျာထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဗဟိုကနေပြီးတော့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့၊ ဖြစ်သင့်ဖြစ်အပ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ အကုန်လုံး ရွေးချယ် စိစစ်ပြီးတော့ ဒီနေ့ အောင်အောင်မြင်မြင်ပဲ ရွေးချယ် ပြီးစီးသွားပါပြီ။ အဆင့်ဆင့် တင်ပြတာတွေတော့ ရှိဦးမှာပေါ့။”
ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင် ဘယ်နှစ်ဦး ရွေးချယ်ပြီးပါပြီလဲ။
“ဗဟိုဦးစီး အဖွဲ့ဝင် ၁၀၀ ရှိပါတယ်။”
ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ကို CEC အဖွဲ့က ရွေးချယ်တဲ့အခါ ဘယ်လိုမျိုး စံတွေနဲ့ သတ်မှတ်ပြီး ရွေးချယ်ပါလဲ။
“ပြည်နယ်၊ တိုင်းကို ကျနော်တို့က ကိုယ်စားလှယ်လောင်း လျာထားဖို့ ဖိတ်စဉ်အခါတည်းက အရည်အချင်း ပြည့်မီသူ ဖြစ်ရမယ်၊ ပါတီအပေါ် သစ္စာရှိသူ ဖြစ်ရမယ်၊ နိုင်ငံရေးတာဝန်တွေ၊ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို စဉ်ဆက်မပြတ်၊ အကျဉ်းကျနေစဉ် ကာလမှ လွဲလို့ပေါ့၊ စဉ်ဆက်မပြတ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လာတဲ့လူ ဖြစ်ရမယ်၊ နောက်တခုက အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဒီနေ့ သွားနေတဲ့ နိုင်ငံရေး မူဝါဒ လမ်းစဉ်တွေကို လက်ခံ ဆောင်ရွက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမယ်၊ နောက် လောလောဆယ် အရေးယူခံထားရတဲ့လူ မဖြစ်ရဘူးပေါ့ဗျာ၊ ပါတီစည်းကမ်းအရ အရေးယူထားခြင်း ခံထားရသူ မဖြစ်ရဘူး၊ အဲဒီအချက်တွေ ပါပါတယ်။
“အဲဒီအချက်တွေအပြင် နောက် လူမှုအထောက်အကူ လုပ်ငန်းတွေမှာ၊ လူမှုရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ တာဝန် ထမ်းဆောင်ရင်း၊ အဲဒီကဏ္ဍတွေမှာ ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖြစ်ရမယ်။ အဲဒါမျိုးတွေပေါ့။ ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု ဆောင်ရွက်ရင်း အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ သူတွေလည်း အခွင့်အရေး မဆုံးရှုံးစေရဘူး၊ အဲဒီမူတွေနဲ့ ကျနော်တို့ ရွေးချယ်ကြတာပါပဲ။”
အခု အရွေးချယ်ခံရတဲ့ သူတွေကရော သူတို့ကို ရွေးချယ်လိုက်ကြောင်း သိပြီလား။
“မသိနိုင်သေးပါဘူး။ ထုတ်ပြန်ကြေညာမှ သိမှာပေါ့။”
ဘယ်တော့လောက် ထုတ်ပြန်ကြေညာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါသလဲ။
“ကျနော့်အထင်တော့ ဒီအပတ်ထဲမှာတောင် ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။” ( ဗွီအိုအေ )
Posted by flyingpeacock at 9:20 AM0comments Links to this post
NLD နဲ့ ကင်တားနား ဆွေးနွေးချက် အပြည့်အစုံ
ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေဆိုင်ရာ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး မစ္စတာ တိုမာ့စ် အိုဟေး ကင်တားနား (Tomas Ojea Quintana) နဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ခေါင်းဆောင်တွေ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာမှာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျနေတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးကိစ္စ၊ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရေးကိစ္စ၊ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းချခံထားရသူတွေကို လွှတ်ပေးဖို့ကိစ္စနဲ့ လွတ်လပ် တရားမျှတပြီး အားလုံးပါဝင်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေကို ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ NLD ဗဟိုအလုပ်အမှု ဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးခင်မောင်ဆွေက ဗွီအိုအေကိုပြောပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးချက် အပြည့်အစုံကို ကိုကျော်ကျော်သိန်းက တင်ပြထားပါတယ်။
မစ္စတာကင်တားနားနဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ရန်ကုန်မြို့က မြရိပ်ညိုဟော်တယ်မှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက်၊ သောကြာနေ့က တနာရီနီးပါးကြာ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ NLD ခေါင်းဆောင်တွေဘက်က ပထမဆုံး ဆွေးနွေးချက်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ NLD ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးက သူဟာ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တုန်းက ၁၀(က)၊ ၁၀(ခ) ဥပဒေတွေကို ပြုစုရေးဆွဲရာမှာ ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့် ဒီဥပဒေတွေရဲ့ သဘောသဘာဝနဲ့ သက်ရောက်မှုတွေကို အကုန်လုံးနားလည်ကြောင်း၊ ဒါကြောင့် ဒီဥပဒေတွေအရ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ချထားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးဖို့ လိုနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးအရကြည့်ရင်လည်း လွှတ်အပ်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်ကြောင်း မစ္စတာကင်တားနားကို ဆွေးနွေးပြောဆို ခဲ့တယ်လို့ NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးခင်မောင်ဆွေက ပြန်ပြောပြပါတယ်။
"ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသမီးလည်း ဖြစ်တယ်၊ မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးကိုလည်း ဦးစီးဦးဆောင်ပြုနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်၊ တိုင်းရင်းသားများရဲ့ အရေးကိုလည်း ဂရုစိုက်ပြီးတော့ ဖန်ဆီးဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့ အနေအထားမှာရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးကို ဒုဥက္ကဌ ဦးတင်ဦး အနေနဲ့ အထူးတလည် လိုလားပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း မစ္စတာ ကင်တားနားကို ပြောပါတယ်။"
ဒါ့အပြင် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖောက်ဖျက်မှုနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ပြီးပြီးချင်းပဲ ထောင်ဒဏ်ထက်ဝက် လျှော့ပေါ့ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေရဲ့ အမိန့်ထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်မယ်ဆိုရင် ကျန်တဲ့ ထောင်ဒဏ် တနှစ်ခွဲကို လျှော့ပေါ့ပေးမယ်ဆိုတဲ့အချက်၊ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်ရမယ်လို့ စစ်အစိုးရ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်က ပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေကို ပြန်ထောက်ပြီး တော့လည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
"အဲဒီနှစ်ခုကို ညီညွတ်ပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ် ဖြစ်အောင် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ လက်ကမ်းထားတဲ့အဖြစ်တောင် ရောက်နေပြီ ဆိုတဲ့အခါကျတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မလွှတ်ထိုက်ဘူး၊ လွှတ်ထိုက်တယ်ဆိုတာ အငြင်းပွားစရာ မရှိတော့ပါဘူး။ လွှတ်ပေးဖို့ဟာဖြင့် ကျော်တောင်ကျော်နေပါပြီ ကျနော်က တင်ပြပါတယ်။"
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တုန်းက နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးနဲ့ တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ အစိုးရလက်ထက်မှာ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတရပ် ကျင်းပပေးခဲ့ပြီး လွှတ်တော်အမတ် နေရာအများစုကို NLD က အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း မြန်မာစစ်အစိုးရက အနိုင်ရပါတီကို အာဏာလွှဲမပေးဘဲ အဲဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲရေးအတွက် ကျင်းပတာဖြစ်တယ် ဆိုပြီး အမျိုးသားညီလာခံကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အထိ ၁၄ နှစ်ကြာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး NLD က ခုချိန်ထိ ကိုင်စွဲထားတဲ့ ရပ်တည်ချက်နဲ့ သဘောထားကို NLD ခေါင်းဆောင်တွေက မစ္စတာ ကင်တားနားကို ပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။
"၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆန္ဒဖြစ်တယ်။ ဒါကို ကျော်လွှားပစ်ပယ်ဖို့ မထိုက်ပါဘူး။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေကနေပြီးတော့ ဒါကို တနည်းနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းပေးဖို့ ပထမအချက် ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ citizen right ပြည်သူတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို ပစ်ပယ်ရာမရောက်အောင် ကျနော်တို့ တင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်။"
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းမှာ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတခုခု သိသိသာသာ ပြနိုင်ဖို့ဆိုရင် အကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှာ အဖမ်းခံထားရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အားလုံး လွတ်မြောက်ရေးကိစ္စကို အဓိကအကျဆုံးကိစ္စရပ်အဖြစ် အစဉ်တစိုက် ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ အခု မစ္စတာကင်တားနားနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာလည်း NLD တာဝန်ရှိသူတွေက ဒီကိစ္စကို တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
"ယုံကြည်မှုအရ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ၂,၁၀၀ ကျော်ကိုလည်းပဲ အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးသင့်တယ်လို့ ကျနော်တို့ ပြောပါတယ်။ ဒါဟာလည်းပဲ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ လုံးဝ ထိစပ်နေတာကြောင့်မိုလို့ ယုံကြည်မှုကြောင့် အကျဉ်းကျတယ်ဆိုတာ ယုံကြည်မှုတောင်မှ လွတ်လပ်စွာမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့ အဖြစ်မျိုး မရောက်အောင် အဖမ်းခံနေရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကို လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။"
ဒီနှစ်အတွင်းမှာ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ကျင်းပမယ်လို့ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေက ကြေညာထားပါတယ်။ NLD ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မယ်-မ၀င်ဘူးဆိုတာကို ခုချိန်ထိ အတိအလင်း မကြေညာသေးဘဲ ရွှေဂုံတိုင် ကြေညာစာတမ်း ထုတ်ပြန်ပြီး ပါတီရဲ့ရပ်တည်ချက်ကို ပြောထားပါတယ်။ ဒီစာတမ်းပါ NLD ရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကို ခုချိန်ထိတော့ မြန်မာစစ်အစိုးရက လိုက်လျောမယ့်အရိပ်အယောင် မပြသေးပါဘူး။
မစ္စတာကင်တားနားက NLD ရွေးကောက်ပွဲ ၀င် မ၀င် မေးမြန်းတဲ့အပေါ် NLD တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ ဖြေကြားချက်အရ ရွေးကောက် ပွဲဝင်ရေးကိစ္စကို လမ်းဖွင့်ထားဆဲဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့သဘော တွေ့ရပါတယ်။
"လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့က အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အားလုံးပါဝင်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ဖို့လည်း ကျနော်တို့ လိုလားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း၊ ပြီးတော့ နိုင်ငံတကာကနေ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းမျိုးတွေ ပါလာမှသာလျင် ဒါဟာ ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ ကျနော်တို့က ပြောပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ် ဆိုလို့ရှိရင် NLD ၀င်သည်ဖြစ်စေ၊ မ၀င်သည်ဖြစ်စေ တရားမျှတ လွတ်လပ်ဖို့တော့ လိုတယ်လို့ ကျနော်တို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒီတော့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ တကယ်လို့များ NLD မ၀င်ဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ ဆိုတဲ့အခါကျတော့၊ တကယ်လို့ NLD မပါဘူးဆိုရင် တရားမျှတလွတ်လပ်ဖို့က ရာခိုင်းနှုန်း ၁၀၀ % တောင် ဖြစ်သွားမလားလို့ ထင်တယ်လို့ ကျနော်တို့က ပြောပါတယ်။ တကယ်လို့ NLD ပါ ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ အင်မတန်မှ တရားမျှတလွတ်လပ်ဖို့ အထူးဂရုစိုက် လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် နိုင်ငံတကာ စောင့်ကြည့်မှုတွေ မပါဘဲနဲ့တော့ ရွေးကောက်ပွဲဟာ တရားမျှတ လွတ်လပ်မယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားကို ဘယ်လိုမှ လက်ခံဖို့အကြောင်း မရှိပါဘူးလို့ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င် မ၀င်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးတဲ့အခါမှာ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ ILO ကိုယ်စားလှယ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ချိန်တုန်းက NLD နဲ့ အဆက်အသွယ် မလုပ်ခဲ့တာဟာ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်တာတွေ နှောင့်နှေးပြီးတော့ မလိုလားအပ်တဲ့ကိစ္စတွေ ပေါ်လာမှာစိုးလို့ တိုက်ရိုက်မဆက် သွယ်ခဲ့ဘူးလို့ သိရတဲ့အတွက် ဒါဟာမဖြစ်ထိုက်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်ကြောင်း၊ NLD အနေနဲ့ ILO အဖွဲ့နဲ့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် ပြောဆိုဖို့ရာဟာလည်း အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ မစ္စတာကင်တားနားကို ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ဦးခင်မောင်ဆွေက ပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ( ဗွီအိုအေ )
Posted by flyingpeacock at 6:35 PM0comments Links to this post
ကင်တားနား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ခွင့်မရ
ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးစုံစမ်း စစ်ဆေးသူ တိုမာ့စ် အိုဟေး ကင်တားနား (Tomas Ojea Quintana) ရဲ့ ၅ ရက်ကြာ ခရီးစဉ်အတွင်း မျှော်လင့်ထားသလို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်တော့ မရခဲ့ပါဘူး။
လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် တာဝန်ယူစဉ်က စလို့ မြန်မာနိုင်ငံ ၃ ကြိမ် သွားရောက်ခဲ့ပေမဲ့ ဒီတကြိမ်မှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ကို အာဏာပိုင်တွေဘက်က ငြင်းဆန်ခဲ့တာလို့ ရန်ကုန်အခြေစိုက် ကုလသမဂ္ဂရုံးက ပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း သူ့ခရီးစဉ်ရဲ့ ဒီကနေ့ ၄ ရက်မြောက် နေ့မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီရဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့ကမှ ဖမ်းဆီးရာက ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာတဲ့ ပါတီရဲ့ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး အပါအ၀င် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တွေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ အစိုးရဧည့်ဂေဟာ တခုမှာ တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။
တွေ့ဆုံမှုအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ ထိန်းသိမ်းခံ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း ပါဝင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ နိုင်ငံရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေ အပေါ် သဘောထားတွေကို NLD ဘက်က လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်ကို ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ NLD ပါတီက ပြောပါတယ်။
NLD ပါတီအပြင် ဒီကနေ့မှာ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံခဲ့တာ ဖြစ်သလို အထူး ကိုယ်စားလှယ်ဟာ ရန်ကုန်မြို့က အင်းစိန်ထောင်ကို သွားရောက်ပြီး အကျဉ်းသားတချို့နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
မနေ့တုန်းကတော့ အထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ ခရီးစဉ်နဲ့ တိုက်ဆိုင်ပြီး ရန်ကုန် အင်းစိန်ထောင်တွင်းက နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေက ထောင်တွင်း အကျဉ်းသားတွေရဲ့ အခြေခံ အခွင့်အရေးတွေ ရရှိရေး တောင်းဆိုတဲ့ စာတစောင်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အကြောင်း ပြည်ပမှာ အခြေစိုက်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) ကလည်း ပြောပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ အခုခရီးစဉ်အတွင်း ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာတွေကို လေ့လာ အကဲခတ်သွားဖို့နဲ့ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့လည်း ရည်ရွယ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ( ဗွီအိုအေ )
Posted by flyingpeacock at 11:38 PM0comments Links to this post
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကြေညာချက်အမှတ် ( ၄ / ၀၂ / ၁၀ )
Posted by flyingpeacock at 10:54 PM0comments Links to this post
လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှေ့နေ ၄ ဦးနဲ့ ရန်ကုန်မှာ တွေ့ဆုံ
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး စုံစမ်း စစ်ဆေးရေးမှူး မစ္စတာ တောမတ်စ် အိုဟေး ကင်တားနား (Tomas Ojea Quintana) ဟာ ဒီနေ့မနက် ၉ နာရီမှာ မင်္ဂလာဒုံ နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကို ဆိုက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ၅ ရက်ကြာခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ သတင်းနဲ့ ပြန်ကြားရေးဌာန တာဝန်ခံ ဦးအေးဝင်းကို ဗွီအိုအေက ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါ အခုလိုပြောပါတယ်။
“မစ္စတာ ကင်တားနား ရောက်ကတည်းက ကုလသမဂ္ဂ ဒီမှာရှိတဲ့ အဖွဲ့တွေနဲ့ တွေ့တယ်။ တွေ့ပြီးတော့ စောစောက ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းရယ်၊ ဦးဉာဏ်ဝင်းရယ် အဖွဲ့ အားလုံး ၄ ယောက်၊ သူတို့နဲ့ တွေ့တယ်။ နောက် တရားသူကြီး ဦးသောင်းညွန့်၊ ဦးညီညီစိုးတို့နဲ့ပါ တခါတည်း တွေ့သွားတယ်။”
မစ္စတာ ကင်တားနားဟာ ဒီနေ့ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားသံရုံးတွေက သံတမန်တွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ကို မနက်ဖြန် အင်္ဂါနေ့ မနက်စောစောမှာ သွားရောက်မှာဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတော့ ဘူးသီးတောင်မြို့ကို သွားရောက်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ကို ကြာသပတေးနေ့မှာ ပြန်လည်ရောက်ရှိဖို့ ရှိတယ်လို့ ဦးအေးဝင်းက ဗွီအိုအေကို ပြောပြပါတယ်။
မစ္စတာ ကင်တားနားဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့ တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့အတွက် နေပြည်တော်ကို သွားရောက်ဖို့လည်း စီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်း၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ စစ်အစိုးရကို မေတ္တာရပ်ခံထားကြောင်း၊ တွေ့ခွင့်ရမရ မသိရသေးတဲ့အကြောင်း၊ သောကြာနေ့မှာ ပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ စီစဉ်ထားကြောင်းနဲ့ မပြန်ခင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပမယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ ပြန်ကြားရေးဌာန တာဝန်ခံ ဦးအေးဝင်းက ဗွီအိုအေကို ပြောပြပါတယ်။
တဆက်တည်းမှာပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဥပဒေအကျိုးဆောင် အဖွဲ့ကနေ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိ တရားစီရင်ရေး စနစ်ရယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် ဥပဒေကြောင်းအရ သုံးသပ်ချက်တွေကို မစ္စတာ ကင်တားနားကို ဒီနေ့ ရှင်းလင်း ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဥပဒေ အကျိုးဆောင် အဖွဲ့ထဲက တဦးလည်းဖြစ်၊ NLD ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ ဦးဉာဏ်ဝင်းကို ဒေါ်ခင်မျိုးသက်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
“ဒီနေ့ ညနေ ၃ နာရီကနေ ၄ နာရီအထိ မြရိပ်ညိုဟိုတယ်မှာ တွေ့ပါတယ်။ မစ္စတာ ကင်တားနားနဲ့ သူ့ရဲ့ လက်ထောက် ၂ ယောက်၊ ဒီဘက်က ဦးကြည်ဝင်း၊ ကျနော်၊ ဦးလှမျိုးမြင့်၊ ဒေါ်ခင်ဌေးကြွယ်ပါ။ ကျနော်တို့ အဓိက ဒီနေ့ပြောခဲ့တာကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှု၊ မပြီးပြတ်သေးတဲ့ ဒီအမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဥပဒေ အယူအဆတွေကို ကျနော်တို့ ပြောခဲ့တယ်။
“နောက်တခုက မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိ ကျင့်သုံးနေတဲ့ တရားစီရင်ရေး စနစ်က ကောင်းတယ်။ သို့သော်လည်း လက်တွေ့ ကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တာတွေ ရှိနေတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ကျနော်တို့ ပြောခဲ့တာက Open Court မဟုတ်ဘူး၊ အများပြည်သူ ကြားနာခွင့် မရတဲ့ တရားရုံးတွေ ဖြစ်နေတယ်။ ဆွေမျိုး၊ မိသားစုတောင် လုံးဝ နားထောင်ခွင့် မရဘူး။ အဲဒီအခြေအနေကို ကျနော် ပြောပြခဲ့တယ်။
“နောက်တခုက နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမှုတွေမှာ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီး ရဲလက်မအပ်မီမှာ တချို့ ရက်နဲ့၊ တချို့က လနဲ့ကို ကြာတယ်။ အဲဒီကာလတွေကို အချုပ်အဖြစ် မသတ်မှတ်ဘူး။ အဲဒီလို မသတ်မှတ်တဲ့ ကာလတွေအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေ အနေနဲ့ အဲဒီလို ခေါ်ယူ ဖမ်းဆီးထားခွင့်ကလည်း ဘယ်ဥပဒေမှာမှ မပေးဘဲနဲ့ ဒါဟာ အလေ့အကျင့်လို ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ပြောခဲ့တယ်။ အဲဒါတွေပါပဲ၊ ဒီနေ့က။”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ရော မစ္စတာ ကင်တားနား ဘက်က ဘာတွေ တင်ပြသွားတာမျိုး ရှိပါသလဲ။
“မစ္စတာ ကင်တားနားက ပြောပါတယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ်မှာ အရေးယူခဲ့တဲ့ ၁၉၇၅ ခုနှစ် နိုင်ငံတော်အား နှောင့်ယှက် ဖျက်ဆီးလိုသူများ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်တဲ့ ဥပဒေဟာ နိုင်ငံတကာ အဆင့်အတန်းနဲ့ မကိုက်ညီဘူးတဲ့။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနဲ့လည်း မညီညွတ်ဘူးတဲ့။ အဓိက အကြောင်းကတော့ တရားရုံးရဲ့ အမိန့်၊ တရားရုံးရဲ့ စစ်ဆေးမှု မပါဘဲနဲ့ လူတွေကို ချုပ်နှောင်ထားခွင့်ကို အဲဒီ ဥပဒေက ပေးလို့ပါလို့ သူ အဲဒီလို ပြောပြသွားပါတယ်။”
အခု နောက်ဆုံး နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ၁၈ လ ထပ်ချထားတဲ့ အမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ရော။
“သီးခြားတော့ အဲဒီလို မပြောဘူး။ ဒီ ၁၈ လ ဆိုတာလည်း အဲဒီအမှုက ပေါက်ဖွားလာတာပဲလေ။ အဲဒီဥပဒေအရ အရေးယူလို့ ပေါက်ဖွားလာတာပဲ။ အဲဒီဥပဒေကိုက နိုင်ငံတကာ အဆင့်အတန်း မရှိဘူး၊ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေနဲ့လည်း မကိုက်ညီဘူး။ နောက် Without Trial တရားရုံးရဲ့ စစ်ဆေး စီရင်မှု မရှိဘဲနဲ့ လူတွေကို ချုပ်နှောင်တာ လုံးဝ မှန်ကန်မှု မရှိဘူးလို့ အဲဒီလို ပြောတာပါ။”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မစ္စတာ ကင်တားနားက တွေ့ဆုံမယ်လို့ အန်ကယ်တို့ကို ပြောသွားပါလား။
“ဟုတ်ကဲ့၊ ပြောပါတယ်။ သူက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ သူ့အစီအစဉ်ထဲမှာ ပါပါတယ်တဲ့။ ခွင့်ပြုချက် ရရင်တော့ သူ တွေ့ရမှာပဲတဲ့။ အဲတော့ သူ့အစီအစဉ်ကတော့ ၁၈ ရက်နေ့မှာတွေ့ဖို့ အစီအစဉ် ဆွဲထားပါတယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။”
ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အန်ကယ်တို့နဲ့ တွေ့တဲ့အချိန်မှာ ဘာတွေများ ပြောသွားတာ ရှိပါသလဲ။
“ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ မေးခွန်းတခု မေးပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲပေါ်မှာ ဘယ်လိုသဘောထားလဲတဲ့။ ဆိုတော့ ကျနော် သူ့ကိုပြောပြတယ်။ ၂၀၁၀၊ ၂ လပိုင်းရောက်ပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အစီအစဉ်၊ ဥပဒေ ဘာညာ အခုထိ မသိဘူး၊ ဘယ်သူမှလည်း မသိဘူး။ အကယ်၍ ၂၀၁၀ နှစ်ထဲမှာပဲ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ်ဆိုရင် အဲဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ တရားမျှတမှု၊ လွတ်လပ်မှု၊ လုံးဝ မရှိနိုင်ဘူးလို့ ယူဆတယ်လို့ ကျနော် အဲလိုပြောခဲ့တယ်။”
ရွေးကောက်ပွဲအပြင် အန်ကယ်တို့ တခြား ဆွေးနွေးတာမျိုးရော ရှိပါသလား။
“မရှိပါဘူး။ ကျန်တာကတော့ ကျနော်တို့ တရားရုံးဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေကိုပဲ ဆွေးနွေးပါတယ်။”
အခု မစ္စတာ ကင်တားနားနဲ့ အန်ကယ်တို့ ရှေ့နေ ၄ ဦးနဲ့ တွေ့ခွင့်ပေးတဲ့ အပေါ်မှာ အန်ကယ့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုအမြင် ရှိပါသလဲ။
“မစ္စတာ ကင်တားနား အနေနဲ့ ကျနော်တို့ ရှေ့နေများဟာ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်မှုတွေကို နီးနီးစပ်စပ် တွေ့နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ့ ကျနော်တို့ကို တွေ့တာလို့ပဲ မှတ်ယူပါတယ်။” ( ဗွီအိုအေ )
Posted by flyingpeacock at 8:04 PM0comments Links to this post
ဒီပဲယင်းဖြစ်ရပ်သည် နိုင်ငံရေးလှုပ်ကြံမှုဟု ဦးတင်ဦးပြောကြား
ဖေဖော်ဝါရီ (၁၃) ရက်နေ့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်လာသော အန်အယ်လ်ဒီ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးနှင့် ည (၁၀) ခန့်တွင် သွားရောက်တွေ့ဆုံ စကားပြောဆိုခဲ့သည့် အန်အယ်လ်ဒီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တဦးဖြစ်သူ ဦးဝင်းတင်အား ခေတ်ပြိုင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းကာ ဦးဝင်းတင်၏ ပြန်လည်ပြောကြားချက်များကို တင်ပြထားပါသည်။
ပထမဆုံး ကျနော်ပြောချင်တာကတော့ သူ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကောင်းပါတယ်တဲ့။ သူ့မှာ မျက်စိထဲကနေ သွေးယိုတာပေါ့ဗျာ။ အဲဒါရှိတာက အပ သူ့ကျန်းမာရေး ကောင်းပါတယ်တဲ့။ ကျနော်လည်း ၀မ်းသာရတာပေါ့ဗျာ။
နောက်တခုက သူပြင်ပနိုင်ငံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး in touch ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့အိမ်မှာ စလောင်းတို့ဘာတို့ ရှိနေတဲ့အခါကျတော့ ပြည်သူလူထုက လွှင့်တဲ့ဟာတွေရော၊ အာအက်ဖ်အေတို့ ဗွီအိုအေတို့ ဘာတို့က လွှင့်တာတွေရော မပြတ်နားထောင်နေပြီးတော့ ပြည်ပနိုင်ငံရေးကို သိရှိနေပါတယ်တဲ့။ တချိန်တည်းမှာပဲ ကျနော်တို့ရဲ့ ရပ်တည်ချက်တွေကိုလည်း သူကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။ ဦးတင်ဦးဟာ နိုင်ငံရေးနဲ့ မပြတ်မလပ် မကင်းမကွာ ရှိနေတယ် ဆိုတာ သိရပါတယ်။
နောက်တခုက သူ ဒီပဲယင်းကိစ္စကို တော်တော်များများပြောပါတယ်။ ဒီပဲယင်းမှာ သူပုန်သတ်ဖြတ်မှုကြီးကို ကျော်လွှားတဲ့ နေရာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သူနဲ့ နှစ်ယောက် ရှိတာကိုး။ သူ့ရဲ့သုံးသပ်ချက်က ဘာလဲဆိုတော့ ဒီ ဒီပဲယင်းဖြစ်ရပ်ဟာ အမှန်တော့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ကြံမှုပဲတဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မုံရွာတို့ကို ကျော်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ ဘာသွားတွေ့သလဲဆိုတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ စာတမ်းတွေ၊ နယ်ချဲ့လက်ကိုင်တုတ်တို့ ပုဆိန်ရိုးတို့ ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေ၊ ဆောင်ပုဒ်တွေ၊ စာတမ်းတွေ ကိုင်ဆောင်ပြီးတော့ ကြံ့ဖွံ့တွေက ကန့်ကွက်ကြတယ်ပေါ့။ ကန့်ကွက်ပေမယ့်လို့ ဒီမြို့သုံးမြို့ကို ကျော်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ သူဘာသွားသတိထားမိလည်းဆိုတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အဲဒီလို အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတိုင်း အဲဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့နောက်မှာ တယောက်မှ မရှိလောက်အောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက် ပါလာတယ်တဲ့၊ နောက်တခါ အဖွဲ့ထဲက အဖွဲ့ဝင်များကိုယ်တိုင်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နောက်ကို လိုက်လာတယ်။ လူငယ်တွေ ကျောင်းသားတွေဆိုတာကို သူတို့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ စည်းရုံးပြီး ခိုင်းစေထားသော်ငြားလည်း အဲဒီ ကြံ့ခိုင် ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ထဲမှာ ပါနေတဲ့ လူငယ်တွေကိုက လိုက်လာကြတယ်ဆိုတာ သူတွေ့တယ်ပေါ့၊ ဒါက သူရဲ့ သုံးသပ်ချက်ပေါ့။
အဲဒီအချိ်န်ကစပြီး ကြံ့ဖွံ့ဆိုတဲ့ စစ်အစိုးရက ခိုင်းစေထားတဲ့ လက်ကိုင်တုတ်များဖြစ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးအရောင်ပြများ၊ လူမှုရေးအရောင်ပြ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အင်အားတွေဟာ အကုန်လုံးပြိုဆင်းသွားတယ်လို့ သူက သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒါက အရေးကြီးတဲ့ သုံးသပ်ချက်လို့ ကျနော် သဘောထားတယ်။
ဒီလို ပြိုဆင်းသွားတာကို သူတို့မြင်သွားတဲ့အခါမှာ ဒီပဲယင်းလိုနေရာမျိုး ညဖြတ်ရမယ့်နေရာမျိုးမှာ နိုင်ငံရေးလုပ်ကြံမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုကို လုပ်တော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်တယ်လို့ သူထင်မြင်ယူဆတယ်ပေါ့။ ဒါကတခုပေါ့၊ ဒီပဲယင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းခံပေါ့။
နောက်တချက်က ဒီပဲယင်းမှာ အကုန်လုံးဝိုင်းရိုက်ကြတယ်။ လမ်းတလျှောက်လုံးကြားလာခဲ့ရတဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေကိုပဲ မှောင်ထဲမည်းထဲမှာ ကြားရတယ်။ ကြားပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကားကိုလည်း ရိုက်တယ်။ သူ့ကားကိုလည်း ရိုက်တယ်။ အဲဒီအခါမှာ သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တိုက်တွန်းတယ်။ လွတ်ရာကျွတ်ရာကို သွားပါလို့ ဆိုတာကို မသွားဘူးလို့ ပြောတယ်တဲ့။ ကျမရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေလည်း အများကြီးအရိုက်ခံရတယ်။ အဲဒီအချိန်အခါမျိုးမှာ ကျမထွက်မသွားနိုင်ဘူး ဆိုပြီး အကြိမ်ကြိမ်ငြင်းတယ်။ အဲလို ငြင်းနေတုန်းမှာပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကားဘေးမှာ မတ်တတ်ရပ်နေတဲ့ လူငယ်တွေလည်း အရိုက်ခံရတယ်။ အကုန်လုံး ၀ရုန်းသုံးကားဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ အဲဒီမှာ သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကားမောင်းတဲ့ ကလေးတွေကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အသက်ကို ကယ်လိုက်တာပဲတဲ့။ အတင်းဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ဖြတ်သန်းမောင်းသွားရတယ်ပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးသတ္တိ၊ ဓမ္မသတ္တိကိုလည်း သူချီးမွမ်းတယ်တဲ့။ ဒါတွေဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ တရားဓမ္မဘက်မှာ ရပ်တည်နေတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကြောင့်လည်း ကျော်ဖြတ်နိုင်တာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း သူသုံးသပ်ပါတယ်။
နောက်သူကိုယ်တိုင်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ လွတ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျမှ သူ့ကားလည်း မောင်းသွားရတယ်။ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်သူတွေနဲ့ သူကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။
အဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့ ဒီပဲယင်းကို သူက (၁) ကြံ့ဖွံ့လိုဟာမျိုးတွေ ဆိုးဝါးတဲ့ဟာ၊ (၂) ကတော့ ဒါဟာ နိုင်ငံရေး အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်တယ်လို့ သူက သုံးသပ်ပါတယ်။ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ပါးစပ်က ပြောတာ ကြားရပါတယ်။
နောက်တခုက ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပါတီရဲ့မူဝါဒဖြစ်တယ်၊ ပါတီရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေ ဖြစ်တယ်လို့ သူသတ်မှတ်တယ်။ ဒါကို တစုံတရာ အကြောင်းပြန်ခြင်း မရှိသရွေ့ကာလပတ်လုံး ဒီမူပေါ်မှာ စွဲစွဲမြဲမြဲ ရပ်တည်သွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
နောက်တခု အရေးကြီးတဲ့တချက်က လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့စကားထဲမှာပါလာတဲ့ကိစ္စက ကျနော် အမှန်အတိုင်း ပြောရမယ်ဆိုရင် မင်းကိုနိုင်တို့၊ ကိုကိုကြီးတို့ဆိုတဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေ ထောင်ထဲမှာ ရှိနေတာ မကြိုက်ဘူးတဲ့။ အမြန်ဆုံး သူတို့လွတ်မြောက်ရေးကိုလည်း ကျနော်တို့ ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ပေးရမှာပဲတဲ့။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ လူငယ်တွေဟာ ရှစ်လေးလုံးကာလ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးကို ဦးဆောင်ခဲ့သူတွေ ဖြစ်တယ်။ ဒါကို ကျနော်အသိအမှတ်ပြုတယ်တဲ့။ သူကိုယ်တိုင်က အငြိမ်းစားယူပြီး အိမ်မှာထိုင်နေတဲ့အချိန်၊ အဲဒီအချိန်မှာ ကျောင်းသားလူငယ် လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ လူထုကြီးကနေပြီးတော့ သူ့ကိုချဉ်းကပ်လာပြီးတော့ သူ့ကို နိုင်ငံရေးလောကထဲ ပြန်ခေါ်သွားတယ်၊ နိုင်ငံရေးစင်မြင့်ပေါ် ပြန်တင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားရှိတယ်တဲ့။ ဆိုတော့ ဒီလူငယ်တွေရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုတွေ လူငယ်တွေရဲ့ အားထုတ်မှုတွေ၊ ဒီမိုကရေစီ မျှော်မှန်းချက်တွေကို ကျနော်တို့ အသိအမှတ်ပြုရမှာပဲတဲ့။ သူတို့ခံစားနေရတဲ့ ဒုက္ခ သုက္ခတွေကိုလည်း အမြန်ဆုံးပြေငြိမ်းအောင် လုပ်ရမှာပဲလို့ သူက ပြောပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း ကျနော်ကလည်း သူ့ကို ပြောပါတယ်။ ဥက္ကဋ္ဌကြီး ကျနော်လည်း ဒီအတိုင်းပဲ သဘောထားပါတယ်။ ကျနော့်ကိုယ် ကျနော်လည်း အရေးတော်ပုံတပ်သားဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ခံယူပြီးတော့ လုပ်နေပါတယ်။ အရေးတော်ပုံကို ကျနော်တန်ဖိုးထားတဲ့အတွက် ဒေါ်စုနဲ့ကျနော် ပြောဖူးတဲ့စကားရှိပါတယ်။ အဲဒါဘာလဲဆိုရင် ကျနော်တို့ပါတီဟာ အရေးတော်ပုံကနေ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ပါတီ ဖြစ်တယ်။ ဒေါ်စုကိုယ်တိုင်၊ ဦးတင်ဦးကိုယ်တိုင်၊ ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်ဟာ အရေးတော်ပုံကြီးကနေ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ခေါင်းဆောင်မျိုးဆက်များ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်တို့များ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ဘာတွေများဝင်ကြမယ်။ နောက်တခါ လူထုက တင်မြှောက်တဲ့အတွက် အစိုးရအဖွဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ စဉ်းစားရမှာ (၃) မျိုးရှိပါတယ်။ ပထမက ဘာလဲဆိုရင် ကျနော်တို့အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ အာဏာပိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ စီအီးစီအဖွဲ့လိုမျိုး သို့မဟုတ် စီစီအဖွဲ့လိုဟာမျိုးဟာ ကျနော်တို့အရေးတော်ပုံမှာ ပါဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ အခြေခံပြီးတော့ ဖွဲ့ရလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ အရေးတော်ပုံမှာ ရှေ့တန်းကနေ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်တာမဟုတ်တောင်မှ တစုံတရာပါဝင်မှု ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့ဝင်များနဲ့ ဖွဲ့စည်းရမယ်။ အနည်းဆုံး ဒီအရေးတော်ပုံ ထောက်ခံတဲ့သူတွေ ဒီအရေးတော်ပုံရဲ့ ရည်မှန်းချက်များကို လက်ခံတဲ့သူတွေနဲ့ ကျနော်တို့ ဖွဲ့စည်းရမယ်။ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့လိုဟာမျိုးက အရေးတော်ပုံတပ်သားတွေနဲ့သာ ဖွဲ့စည်းရမယ်။ အရေးတော်ပုံမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့သာ ဖွဲ့စည်းရမယ်၊ အရေးတော်ပုံ ရည်မှန်းချက်များကို လက်ခံတဲ့သူများနဲ့သာ ဖွဲ့စည်းရမယ်။
ဒုတိယ အချက်ကတော့ လွှတ်တော်လိုဟာမျိုး၊ ရွေးကောက်ပွဲလိုဟာမျိုး လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း ဘာပဲပြောပြော အရေးတော်ပုံမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေ၊ ဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့သာ ကျနော်တို့ ကျင်းပဖို့လိုမယ်။ နောက်တချက်ကတော့ ကျနော်တို့ အာဏာတို့ ဘာတို့ရခဲ့သော် သို့မဟုတ် ပြည်သူကလွှဲအပ်လို့ ကျနော်တို့ အစိုးရအဖွဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို ထမ်းရွက်ရမယ် ဆိုရင်လည်း အဲဒီအစိုးရလိုဟာမျိုးဟာ အရေးတော်ပုံကက်ဘိနက်ပဲ ဖြစ်ရလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်ဆွေးနွေးခဲ့ဖူးတဲ့အကြောင်း သူ့ကိုလည်း ပြောပြပါတယ်။
နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ သူပြောတဲ့ဟာကတော့ သူရဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မှာ သဘောထားပေါ့။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အရိပ်ကို ခိုပြီးတော့ နိုင်ငံရေးလုပ်နေတာပဲ ဆိုတဲ့စကားကို၊ ဒါလည်း သူအလွန် နှိမ့်နှိမ့်ချချနဲ့ ပြောတာတခုဖြစ်တယ်။ နောက်တခုကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုကို လုံးဝဥဿုံ ခံယူတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို ကမ္ဘာသိကို ကြေညာလိုက်တာပဲ။ ဒါက သူဘီဘီစီမှာပြောတဲ့စကားလည်း ပါတာကိုး။ ဒါကြောင့် ကျနော်က ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ ပြောဆိုချက်တွေဟာ နိုင်ငံရေးရိုးသားမှုရှိတယ်၊ နိုင်ငံရေးအမြော်အမြင်ရှိတယ်၊ ခေါင်းဆောင်တင်ရမယ့်လူကို ခေါင်းဆောင်တင်ရမှာပဲဆိုတဲ့၊ ခေါင်းဆောင်သွားတဲ့နောက်ကို လိုက်ရမှာပဲဆိုတာကို ထွန်းလင်းပြတဲ့ သဘောဆောင်တယ်လို့ ကျနော်ယူဆပါတယ်။
ကျနော်တို့ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို ခေါင်းဆောင်မျိုးရထားတာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာစကားနဲ့ပြောရင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဒေသနာကျမ်းတွေမှာ သုံးလေ့သုံးထရှိတဲ့စကားနဲ့ ပြောရင် အတော်ကို အရတော်တယ်လို့ ငါတို့ဘ၀မှာ အရတော်လေစွလို့ပဲ ပြောရမှာပဲလို့ ကျနော်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ( ခေတ်ပြိုင် )
Posted by flyingpeacock at 12:15 PM0comments Links to this post
ကိုကျော်သူ ရဲ့ သုခအလင်း မွေးဖွားခြင်း
“မွေးဖွားခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်း” စကားအရ “ဖြစ်လျှင်ပျက်မည်” ဖြစ်သော်ငြားလည်း ဖြစ်ချင်းပျက်ချင်းတို့သည် ရုပ်ဝတ္ထုတို့နှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်။ စိတ်သတ္တိ နှင့်မသက်ဆိုင်ချေ။
ခိုင်မာသော စိတ်ဓာတ်နှင့် ရဲရင့်သော ခံယူချက်တို့ကို မည်သည့်အရာကမှ မဖျက်ဆီးနိုင်ချေ။
ဖြစ်ခြင်းနှင့် ပျက်ခြင်းကြားကာလ . . . ။
မွေးဖွားခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်း ကြားကာလ၌ အများအတွက် အကျိုးပြုမည့်၊ အကျိုးရှိမည့် အရာများကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ပေးရမည့် တာဝန်မှာ ကျွန်တော်တို့ လူမှုရေးသမားများ၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့သည် ဘဘဦးသုခ ရည်မှန်းမျှော်လင့် မျိုးဆက်ချပေးခဲ့သော နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်၍ ပြည်သူလူထုတို့ကို ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ရာမှ “သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း” ဟူသော အခမဲ့ဆေးဝါးကုသပေးသော ကုသိုလ်ကို ရယူခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ယခုတစ်ဖန် . . . “သုခအလင်း” စာကြည့်တိုက်ဟူ၍ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအတွက် ရည်သန်လျှက် မွေးဖွားခဲ့ပြန်ပါသည်။
“သုခအလင်း” အဓွန့်ရှည်ရေး၊ ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် ကျွန်တော်တို့၏ စိတ်ဓာတ်၊ ခံယူချက်တို့ ခိုင်မာရဲရင့်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့သည် ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ခိုင်မာသော ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ရဲရင့်သော ခံယူချက်များ ဖြစ်သော . . .
“ငါ့အား ဖုံးလွှမ်းထားသော လကွယ်သန်းခေါင်ယံ . . . ၊ ယင်းမှောင်မိုက်အတွင်းမှနေ၍ အရှုံမပေးသော ငါ့စိတ်ကို ဖန်ဆင်းပေးသူ နတ်၊ သိကြားကို ငါသည် ကျေးဇူးစကားဆိုပါ၏။ လောကဓံတရား၏ လက်ခုပ်အတွင်းသို့ ဘယ်လိုပင်ကျရောက်စေကာမူ ငါကား မတုန်မလှုပ်၊ မငိုကြွေး။ လောကဓံတရား၏ ရိုက်ပိုက်ခြင်း ဒဏ်ချက်ကြောင့် ငါ၏ ဦးခေါင်းသည် သွေးသံတို့ဖြင့် ရဲရဲနီနေ၏၊ သို့သော် ညွတ်ကားမညွတ်။ လောဘဒေါသတို့ ကြီးစိုးရာဌာန၏ အခြားမဲ့၌ကား သေခြင်းတရားသည် ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ ငံ့လင့်နေ၏။ သို့ပင်မူ ငါ့အားမတုန်လှုပ်သည်ကိုသာ တွေ့ရပေအံ့။ နောင်ကိုလည်း ဘယ်တော့မှ မကြောက်သည်ကို တွေ့ရပေအံ့။”
. . . ဟူသောစကားလုံးများသည် ကျွန်တော်တို့အတွက် ခိုင်မာရဲရင့်သော အားဆေးများပင်ဖြစ်တော့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ အားဆေးများနှင့် ဘဘဦးသုခရဲ့အမွေ (လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး) ကိုထပ်မံတိုးပွားမှုပြုခဲ့သော ဤ”သုခအလင်း” စာကြည့်တိုက်ကို ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်သော ၁၃.၂.၂၀၁၀ ရက်နေ့တွင် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအတွက် ရည်သန်လျက် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) တည်ရှိရာ နေရာဌာန၌ မွေးဖွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအတွက် ရည်သန်၍ ဘဘဦးသုခမျိုးစေ့ချပေးသော လူမှုရေးစိတ်ဓာတ်နှင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့်၊ ဖြစ်ပေါ်လတ္တံ့၊ ဖြစ်ပေါ်နေဆဲ အတိုက်အခိုက်၊ အနှောက်အယှက်၊ အဖျက်အဆီး၊ အတားအဆီးမှန်သမျှကို ကျွန်တော်တို့၏ ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ရဲရဲတော်စကားလုံးများကို လက်ခံကျင့်သုံးကာ ကျွန်တော်တို့၏ ဘဝပန်းတိုင်၊ ပြည်သူတို့၏ ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းတိုင်သို့ ရောက်အောင် ဤ”သုခအလင်း”နေရာဌာနမှ မလျော့သောဇွဲနှင့် လက်တွဲမဖြုတ် ချီတက်ကြပါမည်ဟု သန္နိဌာန်ချလိုက်ပါသည်။
ဘဘဦးသုခနှင့် ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ရောက်ရာမြင့်မြတ်သော ဘုံဌာနအသီးအသီးမှ သာဓု . . သာဓု . . .သာဓု . . ခေါ်ဆိုပါလေတော့ . ..
Posted by flyingpeacock at 9:00 PM0comments Links to this post
အမေရိကန်မူဝါဒကို ထောက်ခံကြောင်း ဦးတင်ဦး ပြော
၆ နှစ်ကြာ အချုပ်အနှောင်ခံခဲ့ရသော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးက အမေရိကန် ဘားရက် အိုဘားမားအစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ထားရှိသော မူဝါဒကို ထောက်ခံ ပြောဆိုလိုက်သည်။
၈၂ နှစ်အရွယ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးတင်ဦးက အမေရိကန်၏ မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် ထိတွေ့ဆက်ဆံရေး မူဝါဒကို ကြိုဆိုကြောင်း သတင်းထောက်များ၏ အမေးကို ဖြေကြားခဲ့သည်ဟု အတူတကွ ရှိနေခဲ့သော အန်အယ်ဒီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်နှင့် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာဝင်းနိုင်က မဇ္ဈိမကို ပြောပြသည်။
''ဒါ ကောင်းတဲ့ကိစ္စပါ။ လုပ်သင့်တာလည်း ကြာပါပြီတဲ့။ အိုဘားမား တက်လာကတည်းက ဒါကိုလည်း ပြောနေတယ်တဲ့။ သူအနေနဲ့ ကြိုဆိုတယ်ပေါ့'' ဟု ဒေါက်တာဝင်းနိုင်က ပြောသည်။
ထို့ပြင် ၁၄ နှစ်ကျော်ကြာ အချုပ်အနှောင်ခံနေခဲ့ရသော ပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်လာလိမ့်မည်ဟု ဦးတင်ဦးက မျှော်လင့်နေသည်။
''သူလွတ်ပြီးရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဖို့ ကြိုးစားပါမယ်တဲ့။ အဲဒီအပြင် သူလွတ်ပြီးလို့ရှိရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မကြာခင် လွတ်တတ်တယ်တဲ့'' ဟု ဒေါက်တာဝင်းနိုင်က ပြန်ပြောသည်။
ကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်လာသော်လည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အကျဉ်းထောင်အတွင်းရှိနေခြင်းက ဝမ်းမသာနိုင်ဘဲဖြစ်နေသည်။
“ ဘယ်လိုများ ခံစားရလဲဆိုတော့ ဝမ်းမသာပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့လူတွေက အခုထက်ထိ အကျဉ်းကျနေတာပဲ။” ဟု ဦးတင်ဦးက မဇျိမသို့ ဖြေကြားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ခေါင်းဆောင်မှုကို ဆက်လက်ခံယူသွားမှာဖြစ်သလို ဒီမိုကရေစီရရှိသည့်အထိ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားသည်ဟု သိရသည်။
မျက်စိကုသမှု ခံယူနေရသော ဦးတင်ဦးကို လွှတ်ပေးရန်အတွက် စနေနေ့ည ၈ နာရီခွဲကျော်တွင် ရဲများ ရောက်ရှိလာပြီး နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကို ရုပ်သိမ်းကြောင်း ကြေညာကာ လုံခြုံရေးများ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ရက်အနည်းငယ်အတွင်းက လွတ်မြောက်လိမ့်မည်ဆိုသော ခန့်မှန်းချက်များကြောင့် ယနေ့ညနေ ၆ နာရီ မတိုင်ခင်ကပင် အန်အယ်ဒီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်များ အပါအဝင် ထောက်ခံသူများ၊ သတင်းထောက်များမှာ စိုးတထိတ်ထိတ်နှင့် စောင့်ဆိုင်းနေကြပြီး ခြံဝင်းတံခါးပွင့်သည်နှင့် ပျော်ရွှင်စွာ ဝင်ရောက်သွားကြသည်။
''သူ့ကို မြင်လိုက်တော့ စိတ်ထဲမှာတော့ စိတ်မကောင်းဘူး။ နည်းနည်းပိန်သွားတယ်။ အသံလည်း မှိန်သွားတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်မကောင်းပေမယ့် သူ့စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ အားတက်မိတယ်။ ဝမ်းသာပါတယ်'' ဟု အခြားသော ပါတီ CEC တဦးဖြစ်သော ဦးခင်မောင်ဆွေက ပြောသည်။
ဦးတင်ဦးက မနက်ဖြန်တွင် ပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဦးအောင်ရွှေထံ သွားရောက်တွေ့ဆုံမည်ဟု သိရသည်။ ထို့ပြင် ကျန်းမာရေး မကောင်းသော ပါတီခေါင်းဆောင်များဖြစ်သော ဦးလွန်းတင်နှင့် အတွင်းရေးမှူး ဦးလွင်တို့ကိုလည်း နှုတ်ခွန်းဆက်သကြောင်း သတင်းပါးလိုက်သည်။
( မဇ္ဈိမ )
Posted by flyingpeacock at 5:33 PM0comments Links to this post
အန်အယ်ဒီ ဒုဥက္ကဌ ဦးတင်ဦးကို အာဏာပိုင်များက လာရောက်လွှတ်ပေးပုံနှင့် လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် မြင်ကွင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လက်ထောက် အယ်ဒီတာ ရဲရင့်အောင်က ပါတီ CEC အဖွဲ့ဝင်နှင့် ပါတီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဒေါက်တာဝင်းနိုင်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်လာလိမ့်မည်ဟု ဦးတင်ဦးက မျှော်လင့်နေသည်။
မေး။ ။ အန်ကယ်ဦးတင်ဦး လွတ်လာတဲ့အချိန်က မြင်ကွင်းလေးကို ပြောပြပေးပါခင်ဗျ။
၈ နာရီခွဲမှာ ကားနှစ်စီး ဝင်လာတာပေါ့။ စလွန်းကား တစီးရယ်၊ ဗင်ကားအရှည်တစီးရယ် ခြံထဲ ဝင်လာတာပေါ့နော်။ ဝင်သွားပြီးတော့ တံခါးဖွင့်ဝင်ပြီးတော့ သူတို့ ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်တာတော့ တွေ့တယ်။ ၁ဝ မိနစ်သာသာလောက်၊ ၁၅ မိနစ်လောက်မှာ လုပ်စရာကိစ္စတွေ လုပ်ပြီးတော့ သူတို့ ပြန်ထွက်လာတယ်။ ပြန်ထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့ ခြံဝင်းတံခါးကြီး ဖွင့်ထားတယ်၊ လုံခြုံရေးတွေလည်း ရုပ်သိမ်းသွားတယ်။ အဲဒီအခါ ကျနော်တို့တွေရော၊ သတင်းထောက်တွေရော စွတ်ပြီးတော့၊ တိုးပြီးတော့ ဝင်သွားကြတယ်။ ဟိုရောက်တော့ အန်ကယ်က စီးကြိုတယ်။ စီးကြိုပြီးတော့ သတင်းထောက်တွေ မေးတာကို ဖြေတယ်။ ကျနော်တို့က အန်ကယ့်ကို ဧည့်ခန်းထဲမှာ ထိုင်ပြီးတော့၊ နေရာယူပြီးတော့ အေးအေးဆေးဆေး ဖြေပါဆိုတော့ ဧည့်ခန်းထဲကို အန်ကယ့်ကို ခေါ်သွားတယ်။ ဧည့်ခန်းထဲမှာ သတင်းထောက်တွေ မေးကြတာပေါ့။
မေးတဲ့မေးခွန်းတွေထဲက အဓိက မေးခွန်းနှစ်ခုကတော့ အန်ကယ်က အမေရိကန်ရဲ့ အင်ဂေ့ခ်ျမင့် ပေါ်လစီကို ဘယ်လို သဘောထားလဲဆိုတော့ ဒါ ကောင်းတဲ့ကိစ္စပါတဲ့။ လုပ်သင့်တာလည်း ကြာပါပြီတဲ့။ အိုဘားမား တက်လာကတည်းက ဒါကိုလည်း ပြောနေတယ်တဲ့။ သူ့အနေနဲ့ ကြိုဆိုတယ်ပေါ့။
အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုအတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်။ အဖွဲ့ချုပ်က မူဝါဒတွေ၊ အဖွဲ့ချုပ်က ချမှတ်တဲ့အတိုင်း လက်ခံကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ အန်ကယ်က ဖြေပါတယ်။
မေး။ ။ အန်ကယ်ဦးတင်ဦးကို စတွေ့တဲ့အချိန်မှာ ဆရာတို့အနေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုး ခံစားရလဲ။ ဘယ်လိုမျိုးလည်း တွေ့ရလဲ။
သူကလည်း အရမ်းဝမ်းသာတယ်။ ကျနော်တို့လည်း ခြင်ကိုက်တာတွေ၊ ဖြုတ်ကိုက်တာတွေ၊ ဗိုက်ဆာတာတဲ့ ဒဏ်တွေ မေ့သွားတာပေါ့ဗျာ။ အားလုံး ပျော်နေကြတာပေါ့ဗျာ။ အန်ကယ်ကလည်း ပျော်ပါတယ်၊ တပြုံးပြုံးနဲ့ သူကလည်း။ မီဒီယာသမားတွေ မေးတာကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဖြေတယ်။ ကျနော်တို့ကလည်း သူ့အနားမှာ ဝိုင်းထိုင်နေကြတာပေါ့။ ပြီးတော့ မီဒီယာသမားတွေ ပြန်သွားတဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့ကို ဆက်ပြီးတော့ စကားပြောတယ်၊ ဆုံးမတယ်။ ကျနော်တို့ကလည်း ထိုင်ကန်တော့ကြတယ်။
မေး။ ။ အခန်းထဲက မြင်ကွင်းလေး နည်းနည်းလောက် ပြောပြပေးပါ။
အခန်းထဲမှာ ဝင်ဝင်ချင်းတော့ သတင်းထောက်တွေက အစိတ် (၂၅ ယောက်) လောက် ရှိတယ်။ အဲဒီမှာ ဝိုင်းမေးကြတာပေါ့။ အခန်းထဲမှာ နောက်ဆုံးကျန်တာကတော့ CEC အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ မိသားစုတွေ၊ လူငယ်အဖွဲ့ဝင်တွေ ကျန်တာပေါ့။ အခန်းအကျယ်အဝန်းကတော့ ၂ဝ (ပေ) ပတ်လည်လောက် ရှိတယ်။ သတင်းထောက်တွေရော၊ ကျနော်တို့ရောဆိုရင် ၄ဝ၊ ၄၅ ယောက်လောက် ရှိမှာပေါ့။
မေး။ ။ အဖွဲ့ချုပ်တာဝန်တွေကိုရော အန်ကယ်ဦးတင်ဦးက ဘယ်လိုထမ်းဆောင်သွားမလဲဗျ။
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အတွက် ဒုဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို ဆက်ပြီးတော့ ထမ်းဆောင်မယ်။ ဥက္ကဋ္ဌကြီးဆီကိုလည်း သူ မနက်ဖြန် သွားမယ်။ ဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့ တွေ့ပြီးတော့၊ ညှိနှိုင်းပြီးတော့ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပြီးတော့ ဆောင်ရွက်စရာရှိတာကို ဆောင်ရွက်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ပြီးတော့ နာမကျန်းဖြစ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့၊ အန်ကယ် ဦးလွန်းတင်တို့၊ ဦးလွင်တို့ဆီ သွားပြီးတော့လည်း နှုတ်ဆက်ပါတယ်တဲ့။
မေး။ ။ အန်ကယ်ဦးတင်ဦးရဲ့ မျက်စိအခြေအနေက ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
မျက်စိကတော့ ဆက်ပြရမယ်။ မျက်စိ အားနည်းတယ်တဲ့။ မျက်စိ ပြထားတယ်။ မျက်စိကို သူ ဆက်ပြီးတော့ ပြရမယ်ပေါ့။ ဆရာဦးသန်းအောင်နဲ့ ပြတယ်တဲ့။ ဆေးခန်းတော့ ကျနော်တို့ မသိသေးဘူး။
လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေကို အန်ကယ်က ဘယ်လိုသုံးသပ်ပြပါသလဲ။
ဒီဟာအပေါ်တော့ သိပ်မသုံးသပ်ပါဘူး။ လက်ရှိနိုင်ငံရေးကိုကျ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ လမ်းစဉ်အတိုင်း၊ အဖွဲ့ချုပ်က ချမှတ်ထားတဲ့ မူဝါဒအတိုင်း သွားမယ်လို့ သူ ပြောပါတယ်။
မေး။ ။ ဘာတွေကို ဖြည့်စွက်ပြောချင်ပါသလဲ။
သူ့အနေနဲ့ ထူးခြားပြီးတော့ မပျော်ပါဘူးတဲ့။ သူက ဒီကနေ့ လွတ်ရမယ့်နေ့ဆိုတော့ လွတ်ကို လွတ်ရမှာပါတဲ့။ သူ့မျက်နှာကတော့ ပြုံးနေတာပေါ့ဗျာ။ သူ့ဇနီးကလည်း ပြုံးပြုံးပေါ့ဗျာ။ သူလွတ်ပြီးရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဖို့ ကြိုးစားပါမယ်တဲ့။ အဲဒီအပြင် သူလွတ်ပြီးလို့ရှိရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မကြာခင် လွတ်တတ်တယ်တဲ့။ ( မဇ္ဈိမ )
Posted by flyingpeacock at 5:29 PM0comments Links to this post
နေအိမ်အကျယ်ချုပ်သက်တမ်း ၆ နှစ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီး ယနေ့တွင် စစ်အစိုးရက ပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးကို မဇ္ဈိမက ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားသည်။
လွှတ်ပေးလိုက်သည်နှင့် နေအိမ်အတွင်းသို့ အန်အယ်ဒီ အကြီးတန်းခေါင်းဆောင်များ အပါအဝင် ပါတီဝင်များနှင့် သူ့ကို ထောက်ခံသူများက ဝမ်းသာအားရ ကြိုဆိုကြသလို သတင်းထောက်များ၏ မေးခွန်းများ မနားတမ်း ဖြေကြားနေရသော အသက် ၈၂ နှစ်အရွယ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းကို မေးခွန်း ၃ ခု မေးမြန်းခွင့် ရရှိခဲ့သည်။
အခုလို လွတ်လာတော့ ဘယ်လိုခံစားရပါသလဲရှင်။
ဘယ်လိုများ ခံစားရလဲဆိုတော့ ဝမ်းမသာပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့လူတွေက အခုထက်ထိ အကျဉ်းကျနေတာပဲ။
ဆက်ပြီးတော့ ဘာတွေ လုပ်မယ်လို့ စဉ်းစားထားပါသလဲရှင်။
အဖွဲ့ချုပ်ကိုသွားပြီး၊ သတင်းပို့ပြီးတော့ ပေးတဲ့တာဝန်ကို လုပ်ရမှာပေါ့ဗျာ။ ပါတီ CEC (ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့) အမိန့်ကို နာခံရမှာပေါ့ဗျာ။ ပါတီ့ရှေ့ရေး ညီညီညွတ်ညွတ် တိုင်ပင်ပြီးတော့ လုပ်ရမှာပေါ့။
၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘဘရဲ့ ရပ်တည်ချက် သဘောထားက ဘယ်လိုပါပဲရှင်။
ဆက်လက်ပြီးတော့ လုပ်စရာရှိတာက ဒီမိုကရေစီနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စက ဆုံးခန်းတိုင်အောင် မရောက်သေးဘဲကိုး။ အဲဒီတော့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ရအောင်တော့ လုပ်ရမှာပေါ့။ (မဇ္ဈိမ)
Posted by flyingpeacock at 5:26 PM0comments Links to this post
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂ ဦး ထောင်ပြောင်း
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင် ဦးစိန်လှိုင်နှင့် မချို (ခေါ်) ဒေါ်မြင့်မြင့်စိုး တို့အား အင်းစိန်ထောင်မှ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားထောင်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း ကသာထောင်တို့သို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်ကြောင်း မိသားစုဝင်များထံမှ သိရသည်။
စမ်းချောင်းမြို့နယ်မှ ဦးစိန်လှိုင် (၅၄ နှစ်) ကို ယခုလ ၂ ရက်နေ့က ရန်ကုန် အင်းစိန်ထောင်မှ မြစ်ကြီးနားထောင်သို့ ပြောင်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ခယ်မဖြစ်သူ ဒေါ်နွဲ့ဝင်းက “ဒီနေ့ မြစ်ကြီးနားထောင်ကနေ ဆေးစာကျတော့ သူကျန်းမာရေးက အိမ်မှာနေ ကတည်းကနေ အဆုတ် မကောင်းဘူး။ အရမ်းလည်း ချမ်းတတ်တယ်” ဟု သူက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အလုံမြို့နယ် အန်အယ်ဒီဗဟို လူမှု အထောက်အကူပြု အဖွဲ့ဝင် မချို (ခေါ်) ဒေါ်မြင့်မြင့်စိုးသည် စစ်ကိုင်းတိုင်း ကသာထောင်သို့ ရောက်နေကြောင်းကို တူမဖြစ်သူက “အန်တီချိုက ကသာမှာ ရောက်နေတယ်တဲ့ အန်အယ်ဒီရုံးက ဖုန်းဆက်ပြောလာတာ” ဟု ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း လှိုင်မြို့နယ်နေ ဦးရွှေဂျိုး (၅၅ နှစ်) ခေါ် ဦးမြစိုးအား ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်ထောင်တွင် ရောက်ရှိနေကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသော်လည်း မိသားစုမှ မသိရသေးကြောင်း သမီးဖြစ်သူ မနှင်းစန္ဒာက ပြောသည်။
ဦးရွှေဂျိုးသည် သွေးတိုးရောဂါ ခံစားနေရသဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက် စိုးရိမ်နေရသည်ဟု သိရသည်။
သူတို့ ၃ ဦးလုံးကို ယခင်လ ၁၃ ရက်နေ့က တရားမဝင်အသင်းနှင့် ဆက်သွယ်မှု ပုဒ်မ ၁၇ (၁) ဖြင့် စမ်းချောင်းမြို့နယ်တရားရုံးက အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်စီ ချမှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ (မဇ္ဈိမ)
Posted by flyingpeacock at 9:44 AM0comments Links to this post
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ)၏ ၆၃ နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ ကြေညာချက်
63 Union Day Statement
လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၏ ပြည်ထောင်စုနေ့ အထိမ်းအမှတ် အပစ်ရပ် တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများသို့ ပန်ကြားချက်
DPNS Statement on unionday
Posted by flyingpeacock at 9:21 AM0comments Links to this post
ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေး မဆုံးဖြတ်သေးဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော
သိသင့်သိထိုက်သော ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ မထုတ်ပြန်သေးသမျှ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရေး မဆုံးဖြတ်နိုင်ကြောင်း မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုလိုက်သည်။
ယမန်နေ့က သူမနှင့် သွားရောက် တွေ့ဆုံသူများကို ပြောကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရန် လွတ်လပ်စွာ သတင်းရယူနိုင်ခွင့်လည်း လိုအပ်သည်ဟု သူမက မီးမောင်းထိုးပြလိုက်သည်။
'ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရေး၊ မဝင်ရေးကို အခုချိန်မှာ ဘယ်လိုမှ ဆုံးဖြတ်လို့ မရသေးဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေ သိရှိဖို့ အချက်တွေက အများကြီးပဲ။ အဲဒါတွေ ဘာမှ မသိရသေးခင်မှာ ဘယ်လိုမှ ဆုံးဖြတ်ဖို့ မဖြစ်သေးဘူးလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုလိုက်တယ်” ဟု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရနှင့် ရှေ့နေဖြစ်သူ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
နေအိမ် ပြင်ဆင်ရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဦးဥာဏ်ဝင်း၊ အိမ်ပြင်ဆင်ရေး လွှဲအပ်ခံထားရသည့် ဦးထင်ကျော်တို့နှင့် သူမ၏ နေအိမ်တွင် ယမန်နေ့ နေ့လည် ၁ နာရီမှ ၃ နာရီအထိ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
''ဘယ်ရွေးကောက်ပွဲမဆို သတင်း ရယူခွင့်၊ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်၊ သတင်းထုတ်ပြန်ခွင့် ရှိဖို့လိုတယ်။ ဒါတွေ မရှိရင်တော့ ဘယ်လို ရွေးကောက်ပွဲမှ တရားမျှတမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဒီလိုပြောပါတယ်” ဟု ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
အခြေခံ အကျဆုံးဖြစ်သည့် လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့်၊ ပြောဆိုခွင့်၊ စုရုံးခွင့်၊ ဖွဲ့စည်းခွင့် အစရှိသည့် အချက်များ လိုအပ်ကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။
ထိုသို့ ပြောဆိုမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အန်အယ်ဒီ အကြီးတန်း ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ ဦးဝင်းတင်က ''ရွေးကောက်ပွဲ စည်းမျဉ်းတွေကလည်း မထွက်လာသေးတဲ့အတွက် ဒေါ်စုက ဒီလောက်ပဲ ပြောနိုင်မှာပဲ။ ဒါ့ထက်လည်း ပြောဖို့မလိုဘူးပေါ့။ ပြောဖို့ အချိန်ရောက်လာရင် ဒေါ်စုအနေနဲ့ တိကျပြတ်သားတဲ့ စကားတွေ ပြောလာနိုင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်'' ဟု ပြောသည်။
ဦးဝင်းတင်က ''ဒေါ်စုပြောတဲ့ အချက်တွေက အလွန်အရေးကြီးတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အဓိက လိုအပ်ချက် ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံရေး လိုအပ်ချက် ဖြစ်တယ်။ ဒေါ်စုပြောတာ ဘာလဲဆိုတော့ ရွေးကောက်ပွဲ တရပ်ရဲ့ ပြည့်ဝတဲ့ ဂုဏ်အင်္ဂါတွေ ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက် တောင်းဆိုသင့်တာ တောင်းဆိုရမယ်၊ ရပ်တည်သင့်တာ ရပ်တည်ရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ဖြစ်တယ်'' ဟု ပြောသည်။
ထို့ပြင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရ ကျင်းပသွားမည့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါက ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဆီသို့ ဖော်ဆောင်နိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယခင်ကတည်းက ပြောဆိုခဲ့ဖူးကြောင်း ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
လိမ်ညာမှုများ၊ သတင်း အမှောင်ချမှုများဖြင့် ပြည့်နှက်နေခဲ့သော အခြေခံ ဥပဒေ အတည်ပြုရေးကို အတင်းအကျပ် လုပ်ဆောင်ပြီးနောက် စစ်အစိုးရက ယခုနှစ်အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်မည်ဟု ကြေညာထားစဉ် အတိုက်အခံ အင်အားစုများက အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ပေးရန်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများလွှတ်ပေးရန်နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုပြုရန် တောင်းဆိုထားသည်။ (မဇ္ဈိမ)
Posted by flyingpeacock at 12:31 PM0comments Links to this post
ကိုညီညီအောင် အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် အပြစ်ပေးခံရ
မြန်မာနိုင်ငံဖွား အမေရိကန် နိုင်ငံသား ကိုကျော်ဇောလွင်ခေါ် ကိုညီညီအောင်ကို ဒီနေ့ အင်းစိန် အထူးတရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ် ချမှတ်လိုက်တယ်လို့ သူ့အမှုကို လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ရှေ့နေကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ ရန်ကုန် အမေရိကန် သံရုံးကတော့ အခုလို ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်လိုက်တာဟာ တရားမျှတမှု မရှိဘဲ နိုင်ငံရေးအရ အရေးယူတာမျိုးလို့ ယုံကြည်ကြောင်း ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဒေါ်ခင်မျိုးသက်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
မနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ကတည်းက မြန်မာအာဏာပိုင်တွေ ဖမ်းဆီးတာ ခံခဲ့ရတဲ့ ကိုကျော်ဇောလွင်ခေါ် ကိုညီညီအောင်ကို စာရွက်စာတမ်းအတု ကိုင်ဆောင်မှု၊ တရားမ၀င် နိုင်ငံခြားငွေ ကိုင်ဆောင်မှု၊ မှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားအတု ကိုင်ဆောင်မှုတွေနဲ့ စွဲချက်တင်ထားရာက ဒီနေ့တော့ အင်းစိန် အထူးတရားရုံးက ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်လိုက်တယ်လို့ သူ့ရဲ့ အကျိုးဆောင် ရှေ့နေကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ အမှုရဲ့ အခြေအနေကို သိရအောင် ဆက်သွယ် မေးမြန်းတဲ့အခါ ရှေ့နေကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းက အခုလို စပြောပါတယ်။
“ဒီနေ့မနက် ၁၀ နာရီမှာ တရားရုံးက အမှု ၃ မှုစလုံး အမိန့်ချပါတယ်။ ပထမအမှုက ပုဒ်မ ၄၆၈ အရ မှတ်ပုံတင်အတု လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အမှု၊ အဲဒီအမှုမှာ ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် ချပါတယ်။ ဒုတိယတမှုဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံခြားငွေ သတ်မှတ်တာထက် ပိုပြီး ယူလာတယ်ဆိုတဲ့ ပုဒ်မ ၂၄/၁၊ ဒီဟာကိုတော့ ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ် ချတယ်။ နောက်ဆုံးတခုဖြစ်တဲ့ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ရေး ဥပဒေကို ချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ အမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၁ နှစ်ချတယ်။ စုစုပေါင်း ၅ နှစ်ချတယ်။ အဲဒီ ၅ နှစ်က တပေါင်းတည်း ကျခံစေလို့ အမိန့်မှာ ပါတဲ့အတွက် ၃ နှစ် ကျခံရမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုညီညီအောင်က သူ့ရဲ့ ချုပ်ရက်တွေလည်း နှုတ်ရမှာ။ ချုပ်ရက်က ၅ လလောက် ရှိပါတယ်။”
ဒီအမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အန်ကယ်တို့ဘက်က ပြန်ပြီး အယူခံဝင်ဖို့ ရှိပါသလား။
“ဟုတ်ကဲ့၊ လာမယ့်အပတ်ထဲမှာ အန်ကယ်တို့ စပြင်ဆင်မှာပါ။ အယူခံက တက်ဦးမှာပါ။”
ကိုညီညီအောင်ရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကရော။
“ကျန်းမာရေး ကောင်းပါတယ်။ သူ ခြေထောက်တော့ နည်းနည်းနာနေတယ်။ အကြောညပ်တယ်လို့ ပြောတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ပြဖို့ သူ တင်ပြထားတယ်တဲ့။”
ရှေ့နေကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်း ပြောပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် နိုင်ငံသား ကိုညီညီအောင်ခေါ် ကိုကျော်ဇောလွင်ရဲ့ အမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မပြတ် စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ရန်ကုန်က အမေရိကန်သံရုံး တာဝန်ခံတွေဟာ ဒီနေ့တရားခွင်ကို သွားရောက်ခဲ့ပေမဲ့ တိုက်ရိုက် စကားပြောခွင့်တော့ မရခဲ့ဘူးလို့ အမေရိကန်သံရုံး ပြောခွင့်ရ မစ္စတာ ဒရစ် ၀ိုင်းဇက်က ပြောပါတယ်။
“ဒီနေ့တရားရုံးကို ကျနော်တို့ အမေရိကန်သံရုံးက တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေ သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုကျော်ဇောလွင်နဲ့တော့ တိုက်ရိုက်စကားပြောခွင့် မရခဲ့ပါဘူး။”
အခုလို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုမျိုးဟာ တရားမျှတမှု မရှိပါဘူးလို့လည်း မစ္စတာဝိုင်းဇက်က ပြောပါတယ်။
“အခုလို တရားမျှတမှု မရှိတဲ့ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုမျိုးအတွက် ကျနော်တို့ တကယ်ပဲ စိတ်ပူပါတယ်။ ကိုကျော်ဇောလွင်အပေါ် တရားစွဲဆိုမှုတွေဟာ နိုင်ငံရေးအရ အရေးယူတာမျိုးလို့ ကျနော်တို့က ယုံကြည်ပါတယ်။ သူဟာ အမေရိကန် နိုင်ငံသားတယောက် ဖြစ်တာမို့ သူ့ကို သွားရောက် တွေ့ဆုံတာတွေ၊ သူ့အတွက် လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ သူ့ရဲ့ အခြေအနေတွေကို အနီးကပ် မပြတ်ဘဲ စောင့်ကြည့်နေမှာပါ။ သူ့ကို ပြန်ပြီး လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံကို ပြန်ခွင့် ပေးဖို့အတွက် နိုင်ငံတကာ စံနှုန်း စံထားတွေနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်ဖို့ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကို ကျနော်တို့ ဆက်ပြီး တိုက်တွန်းနေမှာပါ။”
အမေရိကန်သံရုံး ပြောခွင့်ရ မစ္စတာ ဒရစ် ၀ိုင်းဇက် ပြောသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုကျော်ဇောလွင်ခေါ် ကိုညီညီအောင်ကို အခုလို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တာမျိုးဟာ တမင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ လုပ်ဆောင်တာမျိုးမို့ တရားမျှတမှု မရှိဘူးလို့ AAPPB နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (မြန်မာနိုင်ငံ) က တာဝန်ခံ ကိုတိတ်နိုင်က ပြောပါတယ်။
“ပထမဦးဆုံး ကိုညီညီအောင်ကို ဖမ်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာ လက်ပစ်ဗုံးမိတဲ့ သူတွေနဲ့ ကိုညီညီအောင်နဲ့ ဆက်စပ်တယ်ဆိုပြီး သူတို့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ အများကြီး ယိုးစွပ်ခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းကြတော့ ဘယ်လိုမှ အဲဒါတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်လို့ မရတော့ သူတို့ မပြောပလောက်တဲ့ ပုဒ်မတွေနဲ့ လျှောက်တပ်ပြီးတော့ အခုလို အမိန့်ချလိုက်တာပေါ့လေ။
“ချလိုက်တဲ့ပုဒ်မတွေအရ ဆိုရင်လည်း ကိုညီညီအောင်က တကယ်တမ်း ဘယ်လိုမှ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အခု မှတ်ပုံတင်အတု လုပ်တယ်ဆိုတာလည်း သူတို့ဆီကို လာတိုင်တဲ့လူက ဘယ်ကလူမှန်းမသိ၊ နောက်တခုက နိုင်ငံခြားငွေ ဆိုတာကလည်း ဗမာပြည်သွားမှတော့ နိုင်ငံခြားငွေ ပါမှာပေါ့လေ။ ဒါကြောင့် အဲဒီကိစ္စတွေနဲ့ စွဲပြီးချတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ တရားမျှတမှု မရှိတဲ့ကိစ္စပါ။ ကိုညီညီအောင်ကို ထောင်ချမယ်ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ရှိရှိ တမင်ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်ကြံတာလို့ မြင်ပါတယ်။
“အဓိက ကိုညီညီအောင်က သူတို့မသိဘဲ တိတ်တဆိတ်ဝင်တယ်ဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ သူတို့ကို အရှက်ရစေတယ်လို့ ခံစားရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကိုညီညီအောင် ပြည်တွင်းကို ၀င်တာ ၈ ခေါက်ရှိပြီဆိုတာ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောထားတယ်။ ဆိုတော့ ပထမအခေါက်တွေတုန်းက သူတို့ မသိလိုက်တဲ့အတွက် ဒီတခေါက်မှ မိသွားတဲ့အတွက် သူတို့က အာဃာတထားပြီး အစီအစဉ်ရှိရှိ လုပ်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။”
AAPPB နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (မြန်မာနိုင်ငံ) က တာဝန်ခံ ကိုတိတ်နိုင် ပြောပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများ၏ ဘ၀ခရီးကြမ်း
( RFA သတင်းဌာန )
Posted by flyingpeacock at 3:09 PM0comments Links to this post
၆၃နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား (ကိုရီးယား)မှတ်တမ်းပုံများ
၆၃ နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား ကိုရီးယားတွင် ကျင်းပ
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် ၆၃ နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနားကို ကိုရီးယားနိုင်ငံ ပူချွန်း နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများ ရိပ်သာ၌ ညီညွှတ်သော မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ အစည်းအရုံး (ကိုရီးယား)က ဦးစီး၍ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ နေ့လည် ၂ နာရီအချိန်က ကျင်းပကြပါသည်။ ပြည်ထောင်စု အလံတော်အား ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်းတို့က လက်ဆင့်ကမ်း သယ်ဆောင်လာပြီးနောက် ညီညွှတ်သော မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ အစည်းအရုံး (ကိုရီးယား)၏ အလှည့်ကျ ဥက္ကဌ စိုင်းမောင်မောင်ဝိုင်းက စင်မြင့်ပေါ်သို့ သယ်ဆောင်၍ ငွေဖလား၌ စိုက်ထူပါသည်။ ၄င်းနောက် တက်ရောက်လာကြသော တိုင်းရင်းသားညီအကို မောင်နှမများနှင့်အတူ ပြည်ထောင်စု အလံတော်အား အလေးပြုကြပြီး ကျဆုံးသွားသော အာဇာနည်သူရဲကောင်းအပေါင်းတို့အား အလေးပြုကြပါသည်။
အဖွင့်အမှာစကားကို စိုင်းမောင်မောင်ဝိုင်းက ပြောကြားပြီးနောက် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ) ကိုရီးယားဌာနခွဲ ဥက္ကဌ ဦးအောင်မြင့်ဆွေနှင့် မြန်မာအရေး လှုပ်ရှားမှု မြှင့်တင်ရေးကော်မတီ (ကိုရီးယား) ဦးစီးအဖွဲ့ဝင် ဦးဘိုဘိုတို့က ဂုဏ်ပြုစကားများ ပြောကြား၍ မြန်မာအသင်း (ကိုရီးယား) ဥက္ကဌ ဦးခင်မောင်ရင်၊ မြန်မာ့ရေး လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ (ကိုရီးယား) ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဦးဝင်းနိုင်ဦး၊ ၊ မြန်မာ့ ကလေးသူငယ်များ၏ ပညာရေး ကူညီထောင်ပံ့ရေး ပရိုဂရမ် အကြံပေး ဦးဝင်းမြင့်ဦး၊ ဆောင်နာမ် မြန်မာ လူမှုရေးအသင်း ဥက္ကဌ ဦးသောင်းထွန်း၊ အန်ဆန်း ရှီးဟွာ မြန်မာ လူငယ်အသင်း ဦးအောင်နိုင်ဝင်းတို့က သ၀ဏ်လွှာများ ဖတ်ကြားကြပါသည်။
ဆက်လက်၍ ရခိုင်ရိုးရာ ဆီမီးအက၊ ကရင် ဒုံးယိမ်းအက၊ သျှမ်းရိုးရာ တေးသီချင်းနှင့် အက၊ မွန်ရိုးရာ တေးဂီတ၊ ချင်းရိုးရာ တေးသီချင်း၊ ကချင်ရိုးရာ တေးသီချင်း၊ ရိမ်းဘိုးအဖွဲ့တို့က အဆိုအတီး အကများဖြင့် တင်ဆက်ကြပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓါတ် အဓွန့်ရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးနှင့် စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စု စနစ် ပေါ်ပေါက်ရေး တို့အရေး စသည့် ကြွေးကြော်သံများ ကြွေးကြော်ကြပြီး အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါသည်။
အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဦးကျော်မိုးလွင်က ဆောင်ရွက်၍ အခမ်းအနားအပြီးတွင် သျှမ်းရိုးရာ ခေါက်ဆွဲဖြင့် တည်ခင်း ဧည့်ခံပါသည်။
Posted by ကိုကိုနာရ်ဂစ် at 8:23 AM0comments Links to this post
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အင်းလျားကန်စောင်းက နေ့ရက်များ
“ဒါ ကျမကိုယ်တိုင် လုပ်ထားတာပေါ့” လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့ရဲ့ရှေ့နေ ဦးဉာဏ်ဝင်းကို ရေခဲမုန့်နဲ့ ဧည့်ခံရင်း ပြောလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူက “အရည် ပျော်မသွားခင် မြန်မြန်လေး စားလိုက်ပါဦး” လို့ ဆက်ပြောပါတယ်။
ရေခဲမုန့် လုပ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိတ်မုန့် ဖုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်နေရတာဟာ ရန်ကုန် အင်းလျား ကန်ပေါင်ဆီက ယိုယွင်းနေတဲ့ အိမ်အိုကြီးထဲမှာ အတင်းအကျပ် ထိန်းသိမ်း ခံထားရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်အတွက် ရှည်လျားလှတဲ့ အကျဉ်းစံ အချိန်တွေကို ကုန်ဆုံးစေတဲ့ နည်းတွေထဲက တခုပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပတေးနေ့မှာ အိမ်ကို အလည် ရောက်ခဲ့တဲ့ ဦးဉာဏ်ဝင်းက “ဒေါ်စုက ပါတီ (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် - NLD) ကို ဒီထက်ပို အားကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်မယ် ဆိုတာတွေကို အစီအစဉ် ရေးဆွဲရင်းနဲ့ သူ့ရဲ့ အချိန်တွေကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနေတာပါ” လို့ ဆိုပါတယ်။
အသက် ၆၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ NLD ပါတီခေါင်းဆောင်ဟာ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လျက် ရှိနေဆဲပဲ၊ ပြီးတော့ အင်္ကျီလက်ရှည် အဝါရောင်နုနုလေးကို ဝတ်ထားတယ် လို့လည်း သူကပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သူ ဆွေးနွေးဖြစ်တဲ့ ကိစ္စတွေထဲမှာ သူ့ရဲ့လက်ရှိနေအိမ် အကျယ်ချုပ်အတွက် ဥပဒေကြောင်းအရ ဘယ်လို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမလဲ ဆိုတဲ့ကိစ္စ၊ NLD ပါတီ တိုးချဲ့ရေးနဲ့ သူ့ အိမ်ကိုပြန်ပြင်ဖို့ ကိစ္စတွေပါတဲ့အကြောင်း ရှေ့နေဦးဉာဏ်ဝင်းက ဧရာဝတီကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဦးဉာဏ်ဝင်းရဲ့အဆိုအရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူ့ရဲ့အချိန်တွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀ိပဿနာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေ ဖတ်ရင်း၊ ပြင်သစ်ဘာသာနဲ့ ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်တွေအပါအ၀င် ခရီးသွားနဲ့ သမိုင်းဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေ ဖတ်ရင်း၊ ရေဒီယို နားထောင်ရင်း၊ မြန်မာ့အသံနဲ့ မြဝတီ ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းတွေသာ ကြည့်ရှုရင်းနဲ့ ကုန်ဆုံးစေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဆင်ဆာလုပ်ထားတဲ့ Times နဲ့ News week မဂ္ဂဇင်းတွေကို သူ့ကို ပေးခွင့်ရှိတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ အင်းစိန်ထောင်မှာ မစ္စတာ ယက်ထောရဲ့အမှု ရင်ဆိုင်နေစဉ်အတွင်း သွားတွေ့တုန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှာထားတဲ့ ပြင်သစ်စာအုပ် အုပ် ၂၀ ကို ပေးခဲ့သေးတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းလည်း ရှေ့နေဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပြပါတယ်။
“ဒေါ်စုကတော့ ကျနော့်ကို နိုင်ငံတကာစာအုပ်တွေ မှာတာပဲဗျာ။ ကျနော်က သူမှာတဲ့အတိုင်း အမြဲတမ်း ပေးခွင့် မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပတေး နေ့တုန်းကတော့ မြန်မာပြည်ကို ဒီဇင်ဘာလက အလည်လာသွားတဲ့ နိုဗဲလ် စီးပွားရေးဆုရှင် ဂျိုးဇက် စတစ်ဂလစ်ရဲ့ စာအုပ်တအုပ်ကို လက်ဆောင်အဖြစ်နဲ့ ဒေါ်စုကို ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်” လို့ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဆက်ပြောပါတယ်။ Stiglitz ကGlobalization and Its Discontent လ်ို့အမည်ရတဲ့ သူ့စာအုပ်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီ ပို့ပေးဖို့ သူရဲ့ခရီးစဉ် အတွင်းမှာ ဦးဉာဏ်ဝင်းကို မှာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် သြဂုတ်လက အင်းစိန်ထောင်ထဲက တရားရုံးတခုမှာ အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် အပြစ်ပေးခံခဲ့ရပြီး အဲ့ဒီကမှ တဆင့် ၁၈ လ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲ ကျခံနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟာသပြဇာတ် နဲ့တူတဲ့ သူ့ရဲ့ တရားရင်ဆိုင်မှုအပြီးမှာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦးတယောက် စစ်အစိုးရ အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေရဲ့ အထူးအမိန့်နဲ့အတူ တရားရုံးကိုရောက်လာပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းရဲ့ သမီးဖြစ်တာကြောင့် အပြစ်ဒဏ်ကို တ၀က်လျှော့သင့်ပြီး ကျန်တဲ့အပြစ်ဒဏ်တွေကို ဆိုင်းငံ့ထားသင့်တယ်လို့ ပြောခဲ့တာပါ။
ဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦး ဖတ်သွားတဲ့အမိန့်ထဲမှာ တကယ်လို့ ဒေါ်စုအောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ သူ့အပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေအတိုင်း အင်းလျားကန်နေအိမ်မှာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နေထိုင်မယ်ဆိုရင် ဆိုင်းငံ့အပြစ်ဒဏ် မပြီးဆုံးခင်မှာဘဲ သူ့ကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးမယ်ဆိုတာ ပါပါသေးတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ အတွင်းမှာ ၁၄ နှစ်နီးပါး အထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး အချိန်အများစုကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဘ၀နဲ့ နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာသုံးသပ်သူတွေကတော့ ဒီတရားစွဲဆိုမှုဟာ နိုင်ငံရေးပြကွက်တခုဖြစ်ပြီး စစ်အစိုးရအနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပခင်မှာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဘ၀နဲ့ ဆက်နေစေ ချင်တယ်လို့ ယေဘုယျ သဘောတူကြပါတယ်။
အခုဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မေလ ၂၀၀၉ မှာ ချမှတ်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်အပြစ်ဒဏ် တ၀က်နီးပါး ကျခံပြီးဖြစ်ပါတယ်။ နိုဝင်ဘာမှာ သူ လွတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦးရဲ့အရိပ်အမြွက်စကား အရဆိုရင် သူ့အနေနဲ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နေထိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ အတွက် အပြစ်ဒဏ်အကုန်လုံး ကျခံရမယ်လို့ အဓိပ္ပာယ် ထွက်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦးရဲ့ စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်က လုံးဝ တရားမျှတမှု မရှိဘူးလို့ ပြောပြီးပါပြီ။ ဦးဉာဏ်ဝင်းရဲ့အဆိုအရ ဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦး ဒီလိုပြောဆိုခဲ့တာဟာ သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးအယူခံကို တရားရုံးမှာ ကြားနာဖို့ စောင့်နေတဲ့အပေါ် အဟန့်အတား ဖြစ်စေတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယုံကြည်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ ၁၈ လ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် အပြစ်ဒဏ်ကုန်ဆုံးမယ့် နိုဝင်ဘာလမှာ လွတ်မြောက်ဖို့ မျှော်လင့်နိုင်ပါသလားလို့ ဦးဉာဏ်ဝင်းကို မေးကြည့်တော့ “လူတယောက် သူ့အပြစ်ဒဏ်ပြီးလို့ လွတ်တာ ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမှ မဟုတ်တာလို့” ဖြေပါတယ်။
“ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်မှာ ဒေါ်စုတကယ်မလွတ်ဘူးဆိုရင်တော့ အာဏာပိုင်တွေက သူတို့ ထွေးပြီးသား တံတွေးကို သူတို့ ပြန်မြိုသလိုပဲ ဖြစ်သွားမှာပေါ့” လို့လည်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဆိုပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ သူက “ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နေထိုင်တယ်ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ” လို့ မေးခွန်း ပြန် ထုတ်ပါသေးတယ်။ “ကျနော်တို့ ယူဆတာတော့ ဒေါ်စုက ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နေနေတာပဲ၊ သူ့အပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေကို ဘာတခုမှ ချိုးဖောက်တာမရှိဘူးလေ” လို့ သူက ပြန်ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဆီ ရေးတဲ့ စာပါအကြောင်းအရာတွေကို ပြည်သူလူထုသိအောင် ဖြန့်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကို ပြီးခဲ့တဲ့လက အစိုးရပိုင်မီဒီယာ ကနေပြီး ရှုတ်ချတိုက်ခိုက် ခဲ့ပါသေးတယ်။
အစိုးရထုတ် သတင်းစာ ဆောင်းပါးတပုဒ်မှာတော့ “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ စာများ နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲထံ မရောက်မီ ယခုကဲ့သို့ သတင်းဌာနများသို့ ပေါက်ကြားခြင်းသည် လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေသော နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ပုံရိပ်ကို ပျက်စီးစေရန် ရည်ရွယ်သည့် လုပ်ရပ်ဖြစ်သည့်အပြင် ဤလုပ်ရပ်ကြောင့် အခြားတဖက် (စစ်အစိုးရ) ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များကို နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာစေနိုင်သည်” လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အကျဉ်းစံဘ၀ကို ပိုပြီးအဆင်မပြေ ဖြစ်စေတာကတော့ ပြုပြင်ဖို့ လိုနေတဲ့အိမ်ကို ပြန်ပြင်မယ်ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့ ကြိုးစားမှုတွေကို တရားဝင် ပိတ်ဆို့နေတာတွေပါပဲ။ အိမ်ပြင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကို သူ့ရဲ့အစ်ကိုဖြစ်သူနဲ့ တခြားဆွေမျိုးတွေက ကန့်ကွက်တာမို့ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်။ ဦဉာဏ်ဝင်းရဲ့ အပြောအရ ဆိုရင် သူ့အိမ်ဟာ အခု လုံခြုံတဲ့ အနေအထားမှာမရှိတော့ပါဘူး။
အကျဉ်းစံဘ၀ရဲ့ ပြယုဂ်တခုဖြစ်တဲ့ သူ့ရဲ့ စန္ဒရားဟာလည်း တီးခတ်လို့မရတော့တာ နှစ်အတော် ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် သူကတော့ တချို့အချိန်တွေကို အနုပညာ အလုပ်တွေနဲ့ ကုန်ဆုံးစေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပထမအကြိမ် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်က လွတ်မြောက်တဲ့ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်း မှုတွေကို အခြေခံတဲ့ Voice of Hope စာအုပ်ကို ရေးသားသူ စာရေးဆရာ Alan Clements ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဘ၀ဟာ အကျဉ်းစံဘ၀မှာ ပို၊ ပိုပြီး ခက်ခဲလာနေပြီလို့ ဧရာဝတီကို ပြောပြပါတယ်။
Alan Clements က “ဒေါ်စုရဲ့ အထင်ရှားဆုံးအရာတွေလို့ ကျနော်အမှတ်တရ ရှိနေတာက သူ့ရဲ့ အေးချမ်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့ ရိုးသားမှုတွေပါပဲ” လို့ ဆိုပါတယ်။
“သူ့ကို ဖိနှိပ်သူတွေ အပါအ၀င် ဘယ်သူ့ကိုမှ မကောင်းစိတ်မွေးတာ၊ ဒါမှမဟုတ် အာဃာတထားတာ ကျနော် တချက်လေးမှ သတိမထားမိခဲ့ပါဘူး” လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
“နောက်ပြီး ဒေါ်စုဟာ သူ့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ သူတွေအားလုံး မိတ်ဆွေတွေဖြစ်လာနိုင်မယ့် နေ့အတွက် သူ ဘယ်လို ဆုတောင်းတယ် ဆိုတာနဲ့ အဲဒီလိုသာ ဖြစ်လာရင် တိုင်းပြည်တခုလုံးအတွက် ဘယ်လောက်များ အကျိုးရှိလိမ့်မလဲဆိုတာတွေကို မကြာခဏ ပြောလေ့ရှိတာပါပဲ” လို့လည်း Alan Clements က ပြောပါတယ်။ ( ဧရာဝတီ )